"Education for Myanmar Youths": 2007
အမေရိကားနိုင်ငံရဲ့ ပြည်နယ်တခုမှာနေထိုင်တဲ့ ဘလောဂါ့ကလိုစေးထူးက သူတို့မြို့ မှ စာကြည့်တိုက်အကြောင်းကို အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားခဲ့ပါတယ် ။
တိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတခုမှာ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများနဲ့တကွ ပြည်သူတွေ အားလုံး အတွက် ပညာရှာရာမှာ အထောက်အကူ တခု ဖြစ်စေဖို့အတွက် `စာကြည့်တိုက်´ ကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံ စီစဉ်ထားရှိတယ်ဆိုတာကို ကျနော်တို့ လေ့လာကြည့်ကြပါစို့…။
အဲဒါကတော့ စာကြည့်တိုက်ရဲ့ အ၀င်ဝပါ။
စာကြည့်တိုက်ကို ရုံးဖွင့်ရက်နေ့တိုင်းမှာ မနက် ၁၀ နာရီကနေ ည ကိုးနာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ စနေနေ့တွေမှာ မနက် ၁၀ နာရီကနေ နေ့လည် ၁ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ပါတယ်။
စာကြည့်တိုက်မှာ မိမိလိုအပ်တဲ့ စာအုပ်၊ စီဒီရွမ်၊ ဗွီဒီယိုခွေ၊ ဒီဗွီဒီခွေ၊ သီချင်းစီဒီ အစရှိတွေကို အခမဲ့ ငှားရမ်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ငှားရမ်းဖို့အတွက်တော့ စာကြည့်တိုက် အဖွဲ့ဝင် ကဒ်ပြားလုပ်ရပါတယ်။ မြို့နယ်နမိတ်အတွင်းမှာ လက်ရှိနေထိုင်နေတာ အမှန်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်သူ မှန်သမျှကို မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ အဖွဲ့ဝင်ကဒ်ပြား ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီ ကဒ်ပြားကိုလည်း အခမဲ့ ထုတ်ပေးတာပါပဲ။
စာကြည့်တိုက်ထဲကို ရောက်သွားတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်အတွက် ကောင်တာမှာ မေးမြန်းခွင့်တောင်းကြည့်တော့ လုံခြုံရေး တာဝန်ကျသူက `စာဖတ်သူတွေကို အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေဘူးဆိုရင် ရိုက်နိုင်ပါတယ်´ လို့ အသာတကြည် ခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်က `ကျနော် လူတွေကို မရိုက်ပါဘူး၊ စာအုပ်တွေကိုပဲ ရိုက်မှာ အသေအချာပါခင်ဗျ´ လို့ အရွှန်းဖောက်လိုက်တော့ သူက ရယ်နေပါတယ်။
စာကြည့်တိုက်ရဲ့ အ၀င်ဝကနေ အထဲကို အတန်ငယ် လျှောက်လိုက်ပြီ ဆိုရင်ပဲ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်နဲ့ သက်ဆိုင်တာတွေကို ထားတဲ့ ဒီနေရာလေးကို ရောက်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ရနိုင်တာကတော့ သီချင်းဟောင်း၊ ရုပ်ရှင်ဟောင်းများနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာလိုသူများအတွက် အထောက်အကူပြု အခွေတွေ၊ ခရီးသွားလမ်းညွှန် ခွေတွေက ပိုများပါတယ်။
ဒါက စာဖတ်ဖို့ စီစဉ်ပေးထားတဲ့ နေရာ တခုပါ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ် စီထားတဲ့ စာအုပ်စင်တွေနဲ့ အတူ အဲဒီလို စာဖတ်ဖို့ နေရာလေးတွေကို လေးငါးနေရာထက် မနည်း စီစဉ်ထားပေးပါတယ်။ စားပွဲပေါ်မှာ စီစီရီရီ ထောင်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေကတော့ လတ်တလောမှာ လူဖတ်များနေတဲ့ စာအုပ်တချို့ပါ။
တယောက်ထဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အေးအေးဆေးဆေး စာဖတ်ချင်သူတွေအတွက်လည်း ဒီလို စာကြည့်စားပွဲလေးတွေကို ထားရှိပေးထားပါတယ်။
စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ အထူး သတိထားလေ့ရှိတာကတော့ `ဆိတ်ငြိမ်ခြင်း´ ကိုပါပဲ။ ကိုယ့်ကြောင့် တခြားသော စာဖတ်သူတွေ အနှောက်အယှက် မဖြစ်ရအောင် လူတိုင်းလိုလိုက အတတ်နိုင်ဆုံး ဆိတ်ငြိမ်စွာ လှုပ်ရှားသွားလာကြပါတယ်။ ဆူညံစွာ အော်ဟစ် စကားပြောခြင်း၊ ခြေသံပြင်းပြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ခုံတွေကို အသံမြည်အောင် တွန်းရွှေ့ခြင်း တွေကို မလုပ်မိအောင် ကိုယ်စီကိုယ်စီ ထိန်းသိမ်းကြတာဟာ လေးစားစရာ ယဉ်ကျေးမှု တခုပါပဲ။
စာကြည့်တိုက်ထဲမှာ ဆဲလ်ဖုန်း ပြောခွင့် မပြုပါဘူး။ ဆဲလ်ဖုန်းပြောဖို့အတွက် စာဖတ်သူတွေနဲ့ အတန်ငယ် အလှမ်းဝေးတဲ့ နေရာမှာ ခန်းမကျယ်တခု စီစဉ်ထားပေးပါတယ်။ ဆဲလ်ဖုန်း မြည်သံ တခုခုကြားတာနဲ့ စာကြည့်တိုက် တာဝန်ကျ တယောက်ယောက်က အနားကို ရောက်လာပြီး အဲဒီ ခန်းမကျယ်မှာ သွားပြောဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
စာအုပ်တွေကို သူ့အမျိုးအစားအလိုက် ဒေသန္တရဆိုင်ရာ၊ သမိုင်း၊ ပထ၀ီ၊ ခရီးသွားလမ်းညွှန်၊ အားကစား၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာ၊ ရသ စသဖြင့် စသဖြင့် စုံလင်စွာ သူ့နေရာနဲ့ သူ ထားရှိပါတယ်။
ရှာချင်တဲ့ စာအုပ်ကို အလွယ်တကူ ရှာမတွေ့နိုင်ဖြစ်နေသူတွေအတွက် အဆင်ပြေပြေ ရှာနိုင်အောင် ထားရှိပေးထားတဲ့ Online Catalog နေရာလေးပါ။ အဲဒီလိုနေရာလေးတွေကိုလည်း လေးငါးနေရာထက် မနည်း စီစဉ်ပေးထားတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
Teen Zone လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အဲဒီ စာဖတ်ခန်းလေးထဲမှာတော့ အသက် ဆယ့်လေးငါးနှစ် ၀န်းကျင် အရွယ် လူငယ်လေး တချို့ ရှိနေပါတယ်။ သူတို့ အရွယ်လေးတွေ ဖတ်ဖို့ ပိုမို သင့်တော်တဲ့ စာအုပ်အမျိုးအစားတွေကို သီးသန့် ခွဲထားပေးတဲ့ အပြင် စာဖတ်ခန်းကိုပါ သီးခြား စီစဉ်ထားပေးပါတယ်။
စာအုပ်တွေကို မိမိဖတ်နိုင်တဲ့ Level အလိုက် ရွေးချယ်ဖတ်ရှုနိုင်အောင် အခုလို ခွဲခြားထားပေးပါသေးတယ်။
ဒီနေရာမှာတော့ စာကြည့်တိုက် အဖွဲ့ဝင်တွေအတွက် ကွန်ပျူတာ အင်တာနက် သုံးနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင် အမှတ်ကို ရိုက်ထည့်ပြီးတာနဲ့ တနေ့တာအတွက် တနာရီ အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့် ရပါတယ်။ တနာရီပြည့်တာနဲ့ အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင် အလိုအလျောက် ပြတ်တောက်သွားပါတယ်။
ပရင့်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ စာမျက်နှာတချို့ရှိရင်လည်း ထုတ်ယူနိုင်ဖို့ ပရင်တာတွေ ထားရှိပေးပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ပရင့်ထုတ်ယူခကိုတော့ ပိုက်ဆံ ပေးရပါတယ်။ သိပ်တော့ ဈေးမကြီးလှပါဘူး။ တမျက်နှာကို ဆင့် ငါးဆယ် နှုန်းပါ။
မိတ္တူကူးယူချင်သူများအတွက်လည်း မိတ္တူကူးစက်တွေ ထားရှိပေးထားပါတယ်။
အဲဒါကတော့ စာကြည့်တိုက်ကနေ ငှားယူချင်တဲ့ စာအုပ်၊ စီဒီ၊ ရုပ်ရှင်ခွေ၊ ဒီဗွီဒီခွေ အစရှိတာတွေကို စာရင်း မှတ်တမ်း သွင်းတဲ့ စက်ပါ။ အဖွဲ့ဝင်ကဒ်ပြားနဲ့ ငှားယူစာရင်းကို အတည်ပြုပြီးရင် ပြန်ပို့ရမယ့် နေ့စွဲပါတဲ့ ဖြတ်ပိုင်းစာရွက်ကို စက်က အလိုအလျောက် ထုတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီနေ့ ကျော်လွန်ပြီးမှ ပြန်ပို့ရင်တော့ သတ်မှတ်နှုန်းထားအလိုက် ဒဏ်ငွေဆောင်ရမှာပါ။
အခုလို ဒီနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့ စာကြည့်တိုက် အကြောင်းကို ဒီနေ့ တင်ဖြစ်တာကတော့ တိုးတက်နေတဲ့ သူတို့ နိုင်ငံမှာ အစိုးရက ပညာရေးကို ဘယ်လောက်အထိ ဦးစားပေးပြီးတော့ စာကြည့်တိုက်ကို အထူးဂရုစိုက် စီစဉ်ထားပေးတယ်ဆိုတာကို ဗဟုသုတ အလို့ငှာနဲ့ နောင်တချိန်မှာ ကျနော်တို့ နိုင်ငံမှာလည်း ဒီလို စာကြည့်တိုက်မျိုးတွေ တည်ထောင်လာနိုင်ဖို့ ရည်သန်ပါတယ်။
တိုးတက်နေတဲ့ သူတို့ နိုင်ငံက သူတို့ တတ်နိုင်တဲ့ အတိုင်းအတာနဲ့ ဒီလို စာကြည့်တိုက်မျိုးတွေကို သေသေချာချာ ဂရုတစိုက်နဲ့ မြို့ရွာအနှံ့တည်ထောင်ထားတယ်ဆိုရင် မတိုးတက်သေးတဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံ အုပ်ချုပ်သူတွေအနေနဲ့လည်း ဒီလောက်အဆင့် စာကြည့်တိုက်မျိုး မတတ်နိုင်သည့် တိုင်အောင် နည်းနာယူတန်တာယူပြီး မိမိအထွာနဲ့ မိမိ တတ်နိုင်တဲ့ စာကြည့်တိုက်များကို အစိုးရရဲ့ စီစဉ်ကြပ်မတ်မှုနဲ့ မြို့ရွာအနှံ့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖွင့်လှစ်သင့်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ အုပ်ချုပ်သူတွေရဲ့ ပြည်သူတွေအပေါ် ထားတဲ့ `ပညာတတ်စေချင်တဲ့ စေတနာ´ ဘယ်လောက် ရှိမရှိဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်မှာပါ။
Nature Travel ဆိုတဲ့ စာအုပ်တအုပ်ကို ငှားယူခဲ့ပြီးတော့ စာကြည့်တိုက် အပြင်ကို ပြန်ထွက်လာတော့ မှောင်စပျိုးနေပါပြီ။
ခပ်သော့သော့ လေနုအေး တချက်က မပြုံးတုံ့ပြုံးတုံ့ဟန်နဲ့ ဝေ့ခနဲ တိုက်ခတ်တာကြောင့် စိမ့်ခနဲ ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်နား တ၀ိုက်က အပင်အုံ့ဆိုင်းဆိုင်းတချို့လည်း လက်ကျန်အရွက် အနည်းငယ် တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ အကိုင်းတွေက ဟိုယိမ်းဒီယိမ်း…။
စာကြည့်တိုက်ကို ပြန်ကြည့်မိတော့ နီယွန်မီးရောင် ထွန်းထားတဲ့ စာကြည့်တိုက် အ၀င်ဝက ပညာအလင်းပါ စွက်ထားလို့ ထင်ရဲ့…၊ လင်းချင်းပါဘိ။ ထည်ဝါပါဘိ။ ခန့်ညားပါဘိ။
အက်ကွဲနေသော ပညာရေး (သို့) အက်ducation (သို့) Crackဂျူကေးရှင်း
ဘလောဂါ့မင်းတစေ၏ ပို့စ်ကို ကူးယူဖော်ပြသည် ။
သူငယ်တန်းမှ ဆယ်တန်းထိ၊ ထို့နောက် တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်မှ နောက်ဆုံးနှစ်အထိ နှစ်ပေါင်းအတော်များများကို ဘ၀၏အနုပျိုဆုံးအချိန်များအတွင်း မြုပ်နှံခဲ့ရပြီးနောက် အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သော ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခုသည် ကွမ်းယာသည်၏လည်ပင်း၌ ချိတ်ဆွဲထားသော သစ်သားဗန်းတစ်ဗန်းလောက်မျှပင် ဘ၀ကို အာမခံချက်မပေးနိုင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ သိရှိခဲ့ရပြီ။
၀လုံးကိုဝိုင်းအောင် အကြိမ်ကြိမ်ရေးကျင့်ခဲ့ကြသော ကျောက်သင်ပုန်းတစ်ချပ်၏ရာဇ၀င် ကွဲရှခဲ့ရလေပြီ။
လျှောက်နေရင်း ပျောက်ဆုံးခဲ့သော ခြေထောက်တစ်စုံအတွက် မည်သူ့ထံ အလျှော်တောင်းရမည်နည်း။
တန်ဖိုးကြီးမားစွာရင်းနှီး၍ ၀ယ်ယူခဲ့ရသော်လည်း အချိန်ရောက်၍ အသုံးချကြည့်မိသောအခါတွင်မှ မည်သို့မျှ အသုံးမ၀င်သော ပစ္စည်းအတုတစ်ခုဖြစ်နေမှန်း ခြောက်ခြားစွာသိရှိခဲ့ရသည်။ သုညတစ်လုံးနီးပါးမျှ တန်ဖိုးမဲ့နေသော ထိုသစ်သီးပုပ်တစ်လုံးကို မည့်သူ့ထံ၌ မျက်ရည်ခံထိုး၍ ပြန်လည်ရောင်းချရမည်နည်း။
နောက်ဆုံးတွင်တော့ မြန်မာလိုရေးတတ်ဖတ်တတ်ခြင်းနှင့် အင်္ဂလိပ်လိုအနည်းငယ်တီးမိခေါက်မိရှိခြင်း တို့ကိုသာ အကျိုးအမြတ်တစ်ခုအနေနှင့် ကျိတ်မှိတ်၍ယူခဲ့ရသည်။ သို့သော် ထို့ထက်ပို၍ အသုံးချခြင်လျှင်တော့ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာတို့၌ ဂုဏ်ပုဒ်တစ်ခုအနေနှင့်လည်း ထည့်သွင်းနိုင်ပါသေးသည်။
"သားတို့၊ သမီးတို့ မျက်နှာမငယ်ခြင်ရင် ပညာတတ်ကြီးတွေ ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနော်" ဟူသည့် မိဘတို့၏စကားသံများသည်လည်း ထိုအနှစ်မဲ့နေသော ကြက်ဥခွံဆန်ဆန် ဘွဲ့လက်မှတ်တို့၏နောက်ကွယ်တွင် ဆွံ့အခဲ့ရပြီ။ အကယ်၍ မြင်တတ်မည်ဆိုပါက ဘွဲ့ဝတ်စုံထူထူကြီးအောက်မှ ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်နေသော အမှောင်ထုကြီးကိုလည်းကောင်း၊ လှောင်အိုက်နေလွန်းသောကြောင့် ၎င်းအမှောင်ထုအား ဖြတ်သန်းစီးဆင်းနေသော ချွေးစေးချွေးပေါက်များကိုလည်းကောင်း ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့ကား အမှောင်ချထားခြင်းခံရ၍ ပူလောင်အိုက်စပ်နေသော ကျွန်ူပ်တို့၏ ပညာရေးပင်ဖြစ်တော့သည်။
အကယ်၍ ဘွဲ့ဝတ်စုံနှင့် ရိုက်ထားခဲ့သော အသင်၏ဓါတ်ပုံများ တစ်ရိုတသေသိမ်းဆည်းထားဆဲဆိုပါက နောက်တကြိမ်ပြန်လည်၍ ထုတ်ကြည့်စေချင်သည်။ ထိုဓါတ်ပုံများထဲတွင် အသင်၏နုတ်ခမ်းများအပေါ်ယံ ပြုံးရီနေကြသော်လည်း သေချာစွာကြည့်မည်ဆိုပါက အသင်၏နှလုံးသားများ မဲ့ရွဲ့တွန့်လိမ်နေသည်ကို ခြောက်ခြားစွာတွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အသင်သည် ဘွဲ့ရပညာမတတ်တစ်ယောက်အနေဖြင့် ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်များသော လောကအတွင်းသို့ အကာအကွယ်မဲ့စွာ ၀င်ရောက်ရင်ဆိုင်ရတော့မည် ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
ဘွဲ့ရပညာမတတ်များ ဖောင်းပွနေသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသည် ဆေးအလှသုတ်ထားသော်လည်း အင်ဂျင်မပါသည့် မော်တော်ကားတစ်စီးနှင့် အလားသဏ္ဌန်တူနေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ကုန်းအဆင်းတို့၌ ဟန်ဆောင်၍ လှိမ့်ချနိုင်ခဲ့သော်လည်း ကုန်းအတက်များပြန်ရောက်သော အခါတွင်မှု ဆက်လက်မမောင်းနှင်နိုင်ပဲ အရှုက်တကွဲ အကျိုးနည်းမျှသာဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ထိုအင်ဂျင်မဲ့ ကားများဖြင့် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟူသော ပန်းတိုင်ကို အရောက်မောင်းနှင်ရန် ကြိုးစားနေသောသူများသည် ဦးနှောက်မဲ့နေသော သူရူးတို့မျှသာလျှင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ အလွန်ပြေပြစ်သော ကုန်းတက်တစ်ခု၌ မိမိတို့ အသည်းအသန် ဆင်းတွန်းနေချိန်တွင် အခြားနိုင်ငံမှကားတို့ကား နံပတ်(1) ဂီယာထိုး၍့် အလွယ်တကူကျော်တက်သွားကြလေပြီ။ ထို့ကြောင့်လည်း ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွင် မွမ်းမံချယ်သထားသော အရေပြားတစ်ထောက်အလှထက် တန်ဖိုးဖြတ်၍ မရနိုင်သော နှလုံးသားတစ်စုံကိုပို၍ အလိုရှိခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အနာဂါတ်တောင့်တင်းခိုင်မာမှုအတွက် ပညာရေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသည် လူတို့အလွယ်တကူနားမလည်နိုင်သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံရာတွင် ပညာခံယူသူ၊ ပညာသင်ကြားပေးသူ နှင့် ၄င်းတို့ကိုထောက်ပံ့သော နိုင်ငံတော်အစိုးရဟူ၍ အဓိကကျသော အချက်သုံးချက်စလုံးပြည့်စုံကြွယ်ဝမှသာလျှင် အောင်မြင်သောပညာရေးတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပေမည်။
ပြည့်စုံကောင်းမွန်သော ထမင်းအိုးတစ်လုံးကျက်ရန် ဆန်၊ ရေနှင့် မီးဟူသော အရာတို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်သကဲ့သို့ပင်ဖြစ်သည် ( ခပ်ညံ့ညံ့ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ခပ်ညံ့ညံ့ပညာရေးတစ်ခု၏ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့သော ကျွန်တော်၏ ခပ်ညံ့ညံ့ဦးနှောက်မှ ထိုထက်သာလွန်ကောင်းမွန်သော ဥပမာတစ်ခုထပ်၍ ထွက်မလာနိုင်တော့) ။
ဆန်နှင့်တူသော ပညာလိုလားသူများနှင့် ရေနှင့်တူသော ဦးနှောက်ကိုဖွပေးနိုင်သည့် ပညာဝေငှသူ အမြောက်အများရှိနေပါလျှက်နှင့် အဟာရပြည့်စုံသော ပညာရေးထမင်းအိုးကြီး မကျက်ခဲ့သည်မှာ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ ရှင်းနေပါသည်။ မီးနှင့်တူသော အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားက လိုလိုလားလား မီးပြင်းမတိုက်ပေးခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ရေစိမ်ထားသော ဆန်ကိုသာစားနေရသည့် လူတစ်ယောက် ၀မ်းဖောဝမ်းရောင်ဖြစ်လာသကဲ့သို့ ကျွန်ူပ်တို့၏ နိုင်ငံသည်လည်း နည်းစနစ်မမှန်သော ပညာရေးတစ်ခုကြောင့် ၀မ်းဖောဝမ်းယောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ ပညာရေးအဟာရမပြည့်ဝသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းကာ လူမမာတစ်ယောက်လို အိပ်ယာထဲလဲလျှောင်းနေခဲ့ရသည်မှာ နှစ်ပေါင်းအတော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်လည်း ထိုထက်ပို၍ကြီးထွားခြင်းလမ်းစကို ရှာဖွေနေကြသော ဦးနှောက်အချို့ မိမိတို့နေထိုင်ရာ မွန်းကျပ်သည့် ဦးခေါင်းခွံအား စွန့်ခွါချန်ရစ်ခြင်းအားဖြင့် ဦးနှောက်ယိုစီးခြင်း (Brain Drain) အစရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကြိုးများဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့ကလည်း မိမိတို့နေထိုင်ရာ မူလဦးခေါင်းခွံအတွင်း၌သာ သင့်လျှော်လုံလောက်သော နေရာနှင့် လွတ်လပ်သော အနေအထားတို့သာ ရှိခဲ့မည်ဆိုပါက မည်သူမျှ ထိုဦးခေါင်းခွံကို စွန့်ခွါကြမည်ဟုမထင်ပါ။ ယ္ခုတော့လည်း ကမ္ဘာမြေ၏ ကြမ်းပြင်တစ်ခုလုံး ထိုဦးနှောက်အပိုင်းအစများဖြင့် ဟိုတစ်စဒီတစ်စ စွန်းထင်း၍ပေကျံနေခဲ့ပြီ။
၎င်းဦးခေါင်းခွံတို့ကို ရိုက်ခွဲခဲ့ကြသော ၀ါးရင်းတုတ်ကိုင် လူရမ်းကားတို့ကလည်း ၎င်းဦးနှောက်ယိုစီးမှု ပြဿနာသည် ၎င်းတို့ကြောင့်မဟုတ်ပဲ အပြင်သို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ခုန်ပေါက်၍ထွက်သွားကြသော ဦးနှောက်အပိုင်းအစတို့၏ အပြစ်သာဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာချက်များထုတ်ပြန်၍ ၎င်းတို့၏ လူမဆန်သော လုပ်ရပ်များကိုတတ်နိုင်သလောက်ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားနေကြသည်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်ကြောင့် အက်ကွဲကာ အင်္ဂါမစုံလင်တော့သော ဦးခေါင်းခွံကြီးအား ဂလောင်ဂလင်အသံမမြည်စေရန် တွေ့ကရာများဖြင့်ထိုးသိပ်ဖိထည့်၍ နိုင်ငံတော်အားဆက်လက် မောင်းနှင်ရန် အမိန့်ပေးနေကြဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့ မျှော်လင့်ထားသလို နိုင်ငံတော်၏ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကား ရှေ့ဆက်ဖို့နေနေသာ ထိုနေရာ၌ လဲပြိုမကျသွားစေရန်ပင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်မနည်းနိုင်အောင် ထိန်းနေရပြီဖြစ်သည်။
ထိုဖြစ်ရပ်ကား စိတ်မနှံ့သော အရူးတစ်ယောက် ဆရာဝန်ထံမှ ခွဲစိတ်ခန်းဝတ်စုံကိုလုယူ၍ ဦးနှောက်အမှေးယောင်နေသော လူနာအားဝင်ရောက်ခွဲစိတ်သည့် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုနှင့် အလားသဏ္ဌန် တူနေပါတော့သည်။ ဆံချည်မျှင်တစ်ပင်မျှအလွဲမခံပဲ ကျွမ်းကျင်တိကျသည့် ခွဲစိတ်မှုဖြင့်သာ အသက်ရှင်နိုင်သော ရောဂါသည်နိုင်ငံတော်ကား ထိုသူရူး၏ ရက်စက်ကြမ်းကျုတ်သော ခွဲစိတ်ဓါးရာတို့၏ အောက်တွင်သွေးချင်းချင်း နီခဲ့ရပြီ။
လူနာ၏ အသက်ကိုစိုးရိမ်၍ ယူကြုံးမရဖြစ်နေသော ဆရာဝန်ကတော့ လူမသိသူမသိ အမှောင်ခန်းထဲ၌ ဆက်လက်အချုပ်အနှောင်ခံနေရဆဲပင်ဖြစ့်သည်။
ထိုခွဲစိတ်ခန်းအတွင်းသို့ ဆရာဝန်နောက်ဆုံးဝင်ခွင့်ရခဲ့သည်မှာ အဘယ်တုန်းကနည်း။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ အမည်ကို ကျောင်းသုံးစာအုပ်များထဲ၌ နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ကြသည်မှာ အဘယ်တုန်းကနည်း။ အနံ့အရသာနှင့်ပြည့်စုံသော ပညာရေးဟင်းလျှာတစ်ခွက်ကို စားသုံးခဲ့ရသည်မှာ အဘယ်တုန်းကနည်း။ ကျွန်တော်ကတော့ မေ့လျှော့၍ နေခဲ့ပြီ။
< မင်းတစေ >
မြန်မာကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ ပညာသင်ယူတဲ့အခါ ရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့ အခက်အခဲလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ မြန်မာပြည်ပညာရေး နဲ့ ခြားနားမှု အရှိဆုံးဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားတွေ အနည်းငယ် ပျာကြရတာကတော့ ဘာသာရပ်အလိုက် ရေးတင်ရတတ်တဲ့ အက်ဆေးများပါပဲ။ ကျွန်မတို့ ယူကေနိုင်ငံက တက္ကသိုလ်တွေမှာ အက်ဆေးများဟာ စာမေးပွဲရဲ့ နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကနေ လေးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းအထိ အရေးပါတာမို့၊ အက်ဆေးမရေးရင် စာမေးပွဲအောင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်သလိုပါပဲ။
များသောအားဖြင့် ဘာသာရပ်တော်တော်များများကို နောက်ဆုံးစာမေးပွဲတခုတည်းနဲ့ မဆုံးဖြတ်ပဲ coursework ကို ၂၀%(သို့မဟုတ်) ၄၀% စစ်ဆေးလေ့ရှိပြီး၊ coursework အောင်မှ စာမေးပွဲကြီးကို ဖြေခွင့်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီ coursework ကို စစ်ဆေးပုံကတော့ ဘာသာရပ်ပေါ်မူတည်ပြီး အနည်းငယ် ကွဲပြားပါတယ်။ သင်္ချာလို၊ စက်မှုလို ဘာသာရပ်တွေကလွဲရင် များသောအားဖြင့် စစ်ဆေးလေ့ရှိတဲ့ ပုံစံကတော့ အက်ဆေးများရေးခိုင်းခြင်းပါပဲ။ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ၊စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ စိတ်ပညာလို ဘာသာရပ်မျိုးတွေမှာ ကျတော့ ပိုလို့ဆိုးပါတယ်။
ပထမနှစ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဟာ semester တခုမှာ 20 credit ဘာသာရပ် (၃)ခု ယူရတတ်ပါတယ်။ ဒါမှလဲ semester နှစ်ခုဆိုရင် 120 credits ဖြစ်မှာပါ။ ယူကေပညာရေးမှာက တနှစ်ကို 120 credits ရှိရပါမယ်။ ဒီလိုနဲ့ semester တခုဆိုတဲ့ လေးလတာကာလမှာတင် ရေးရမယ့် အက်ဆေးက အနဲဆုံး (၃) ပုဒ် ရှိလာတတ်ပါတယ်။ တချို့ဘာသာရပ်တွေဆို နှစ်ပုဒ်တင်ရတာမို့ (၆)ပုဒ်များ ဖြစ်သွားခဲ့ရင် ပျာယာခတ်ကြရပါရော။ Tutorial တွေမှာ presentation လုပ်ဖို့ စာဖတ်ရ၊ အက်ဆေးတပုဒ်ပြီး တပုဒ်ကလဲ deadline တွေ နီးလာကြ၊ စာကြည့်တိုက်တွေပြေးရ၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ Journal article တွေပြေးရ၊ လက်ချာအမှီသွားရ နဲ့ ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတတ်ပါတယ်။
အတန်းကြီးလာတာနဲ့အမျှ အက်ဆေးရေးရမယ့် စာလုံးအရေအတွက်ကလည်း ပိုများလာတတ်ပါတယ်။ ပထမနှစ်မှာ 1500 words ကနေ နောက်ဆုံးနှစ်ရောက်ရင် 3000 words လောက်ဖြစ်သွားပြီး၊ မဟာဘွဲ့ရောက်တော့ 3000-5000 words အထိဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဘွဲ့ကြို Dissertation, ဘွဲ့လွန် Dissertation, PhD Dissertation တွေကျတော့ စာလုံးရေတွေ သောင်းနဲ့ချီ ပါတယ်။ Dissertation work က တော့ သုတေသန ဘက်ကိုဦးတည်ပါတယ်။ ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အခြေခံကတော့ အက်ဆေးပါပဲ။ အက်ဆေးကို မကြောက်သူတွေဟာ Dissertation တွေကိုလဲ မကြောက်တော့ပါဘူး။ ကျောင်းတွေပြီးလို့ လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲရောက်တဲ့အခါမှာလဲ project တွေ၊ report တွေ တင်ရတဲ့အခါ အေးအေးသာသာဖြစ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အခုဒီဆောင်းပါးလေးမှာ အက်ဆေးများရေးသားခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အနည်းငယ် ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။
ဘယ်အကြောင်းအရာပဲလုပ်လုပ် အဲဒီအလုပ်ရဲ့ တန်ဖိုးကို သိမှ အဲဒီအလုပ်အပေါ်မှာ တန်ဖိုးထားမှုရှိပြီး မိမိကိုယ်တိုင်လဲ ယုံကြည်မှု ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတဲ့၊ တန်ဖိုးရှိမယ်လို့ မထင်တဲ့ အလုပ်ဆိုရင် မလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်မှုမရှိမှတော့ တစိုက်မတ်မတ်အားထုတ်မှု ဆိုတာ မဖြစ်လာနိုင်သလို တစိုက်မတ်မတ် အားမထုတ်ပဲလဲ အောင်မြင်မှုဆိုတာ ရမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မ မြင်မိပါတယ်။ ကျောင်းမှာ စာမေးပွဲအောင်ဖို့ အက်ဆေးတွေရေးရတဲ့အခါ အောင်ရင်ပြီးရော ဆိုတဲ့စိတ်မဟုတ်ပဲ ဒီအက်ဆေးလေးတွေဟာ ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အကျိုးတကယ်ရှိမယ်ဆိုတာ သိပြီး ရေးလိုက်ရင် အက်ဆေးလေးတွေရဲ့ အရည်အသွေးတွေ အရမ်းတက်သွားမှာပါ။ အလုပ်တခုကို လုပ်ရမှာမို့ လုပ်တာဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှုများပါတယ်။ လုပ်ချင်စိတ်ရှိလို့ကို လုပ်တာဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းပင်ပန်း ပျော်စရာ ဖြစ်သွားပါတယ်။ လုပ်ချင်စိတ်ရှိလာဖို့ကလဲ အကျိုးကျေးဇူးကို သိရပါမယ်။
အက်ဆေးလေးတွေက ဘာအကျိုးကျေးဇူးပေးမလဲ- ကျွန်မတို့ ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ အက်ဆေးတွေ ရေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်လေးတွေ ရင့်သန်လာနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတွေအပေါ်မှာ ကိုယ်ပိုင်ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းတွေလဲ တက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွင်မက စာရေးသားခြင်းဟာ အိုင်ဒီယာအသစ်တွေ၊ အတွေ့အကြုံသစ်တွေကို ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတရပ်အပေါ်မှာ စိတ်ကိုနှစ်ပြီး လေ့လာရတာဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ပျံ့လွင့်မှုကိုလဲ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဗဟုသုတတွေလဲ ပိုတိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်။ အကျိုးအရှိဆုံးကတော့ Expressing yourself လုပ်နိုင်တာပါပဲ။ ဒီအရည်အချင်းဟာ ဘ၀အတွက် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ အက်ဆေးတွေ ရေးခြင်းအားဖြင့် ဒီအရည်အချင်းကို တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ရေးရမယ့် အကြောင်းအရာလေးက ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးနဲ့ ပတ်သက်တယ် ဆိုပါစို့။ အကြောင်းအရာလေးနဲ့ သင့်လျော်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ စဖတ်ကတည်းက လူသားချင်းစာနာနားလည်မှု၊ ဖေးဖကူညီလိုမှု မေတ္တာတရားလေးတွေ ပေါင်းစပ်ပါဝင်လာမယ်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ အကြောင်းရင်းတွေကို စဉ်းစားမိလာမယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ တခုသောနေရာဆီက ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတဲ့ ကလေးငယ်လေးရဲ့ ငိုယိုသံတွေကို ကြားယောင်မိလာမယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဒီအကြောင်းအရာလေးအပေါ်မှာ ခံစားမှုလေးနက်လာမယ်။ စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့အတူ လေ့လာမှု ပိုများလာမယ်။ ကိုယ့်အမြင်ကိုယ့်အတွေးလေးတွေ ပေါက်ဖွားလာမယ်။ ဒါတွေအားလုံး ပေါင်းစပ်သွားရာကနေ ထွက်ပေါ်လာမယ့် စာသားတွေဟာ အက်ဆေးကောင်းလေးတပုဒ်ကို တည်ဆောက်ပေးမှာ အသေအချာပါပဲ။
နောက်တခုအကျိုးကျေးဇူး ရှိတာကတော့ အချိန်အတိုင်းအတာတခုအတွင်းမှာ လုပ်ရခြင်းပါပဲ။ Time constraint ဖြစ်လာတဲ့အတွက် အချိန်တိုင်းဟာ တန်ဖိုးရှိပြီး၊ စိတ်ပျံ့လွင့်မှုကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ ကျောင်းသားတယောက်ရဲ့ ဘ၀မှာ စိတ်လေစရာ အများအပြား ကြုံတတ်ပါတယ်။ မိဝေးဖဝေး၊ ရေမြေခြားမှာ culture မတူတာလေးတွေလည်း ရှိတော့ ကြုံလာအောင် စေ့ဆော်မှုတွေကလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ အက်ဆေးလေးတွေ ရေးစရာရှိနေတဲ့အခါကျတော့ စာဖတ်ချိန်ဖတ်၊ အားကစားလုပ်ချိန်လုပ်၊ ကျောင်းက society တွေ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုင်တာတွေ လုပ်စရာ ရှိတာလုပ်ပြီးရင် ရေးရမယ့်အကြောင်းအရာ လေးတွေအတွက် စာတွေဖတ်ရင်း အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိ ကုန်လွန်လိုက်သလို ဖြစ်သွားပါတယ်။
နောက်တခုက deadline တွေနဲ့လုပ်ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပါ။ ဘယ်နေ့မှာ အပြီးတင်ရမယ်ဆိုကတည်းက ဘယ်နှစ်ရက်အချိန်ရတယ်၊ ဘယ်ရက်မှာ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်ကိုကိုယ် self-organizing လုပ်တဲ့ skill တက်လာပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလဲ deadline တွေနဲ့ လုပ်ရတဲ့အခါ ကြိုတင်ကျင့်သားရပြီးသား ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ သူများချပေးလိုက်တဲ့ deadline တခုကို အချိန်မှီပြီးလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်လဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတက်စေနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတခု ပြီးမြောက်အောင်မြင်သွားတာဟာ သေးသေးကြီးကြီး ကိုယ်ရဲ့အောင်မြင်မှုတခုပါ။ အမှတ်များများရတာမရတာတွေထက် ကိုယ့်ဘက်က လုပ်စရာရှိတာကို ရှိသင့်တဲ့ အားစိုက်မှုတခုနဲ့ ပြီးမြောက်မှုဆိုတာကိုက ကျေနပ်အားရစရာမျိုးပါ။ နောင်တချိန်ဘ၀မှာ အခက်အခဲတွေ ရှိလာတဲ့အခါ ဒီအောင်မြင်မှုလေးတွေကို ပြန်သတိရမိပြီး တွန်းအားဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အက်ဆေးတခုကို သတ်မှတ်ချိန်မှာပြီးအောင် သေချာရေးနိုင်တာဟာလဲ အရည်အချင်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရည်အချင်းကို တိုးတက်အောင် အက်ဆေးလေးတွေက ဖန်တီးပေးနေတာပါ။
နောက်အကျိုးကျေးဇူးတခုကတော့ Tutor တွေဆီက ပြန်လာမယ့် feedback တွေပါ။ ဒီ feedback လေးတွေကနေ ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်၊ အားနည်းချက်လေးတွေကို သိနိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အက်ဆေးတခုဖြစ်အောင် ဘာတွေပြုပြင်ဖို့လိုသလဲဆိုတာကိုလဲ သက်ဆိုင်ရာ ဆရာတွေနဲ့ သွားဆွေးနွေးလို့ ရပါတယ်။ တပည့်တယောက်အတွက် တံခါးမဖွင့်ထားတဲ့ ဆရာဆိုတာမရှိပါဘူး။ ဆရာတွေကို ကြောက်ဖို့မလိုပါ။ လေးစားဖို့တော့လိုပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆရာဆိုတာ ဘ၀စစ်မြေပြင်ကို စစ်ထွက်ရတော့မယ့် တက်သစ်စ လူသားလေးတွေကို လိုအပ်မယ့် အရည်အချင်း၊ ခံနိုင်ရည်၊ သက်လုံကောင်းမှုနဲ့ စစ်ဝတ်တန်ဆာတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်တွေပါ။ တပည့်တယောက်ရဲ့ ဘ၀ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရုပ်လုံးပီပြင်အောင် ထုဆစ်ပေးနေတဲ့ အနာဂတ်ဖန်ဆင်းရှင်တွေပါ။ သူတို့တွေဆီက ပြန်လာတဲ့ feedback တွေနဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေ သိရတဲ့အခါမှာ နောက်တခါကျရင် ဘယ်နေရာမှ အာရုံစိုက်ရမလဲ ဆိုတာတွေသိလာပါတယ်။
ဒါကတော့ အက်ဆေး ရေးသားခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေပါ။ အက်ဆေး မေးခွန်းတွေကို ဘယ်လိုနားလည်အောင် လုပ်မယ်၊ လိုအပ်တဲ့ references တွေ ဘယ်လိုရှာမယ်၊ အက်ဆေး outline ကို ဘယ်လို plan ချမယ်၊ အက်ဆေးကို ဘယ်လိုရေးမယ်၊ references တွေကို ဘယ်လို cite လုပ်မယ်။ Harvard system သုံးမယ်၊ Numeric system သုံးမယ် စတာတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကို နောက်ပိုင်း ဆောင်းပါးများမှာ ဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမယ်။
ကျွန်မ၊ သမိုင်းနဲ့ ထော်လော်ကန့်လန့် ပညာရေး
သမိုင်းကို သင်တာ မအ အောင်လို့လို့ သမိုင်းပါရဂူ ဒေါက်တာ သန်းထွန်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ကျွန်မတို့ တွေ သမိုင်း ဆိုတာကို တတိယတန်း ကျောင်းသူ ဘ၀က စပြီး သင်ကြားခဲ့ကြရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ တွေ သမိုင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန် သင်ကြားခံခဲ့ကြရရဲ့လား။ ကျောင်းများမှာ သမိုင်းကိုဖတ်ပြီး ကျောင်းသားများ ကိုယ့်အမြင်ကို ဆွေးနွေးတင်ပြ အတွေးဖလှယ်ခဲ့ကြရရဲ့လား။ စတုတ္တတန်း ဆရာမက လွဲလို့ တခြားဆရာများ ထံက တခါမှ မရခဲ့ ဖူးပါဘူး။ ဆရာမ ကျောက်သင်ပုန်းမှာ ရေးပေးတဲ့ မေး၊ ဖြေ သင်ခန်းစာများကိုလိုက်ကူးပြီး သမိုင်းကို သမိုင်း ကြောင်းလို မလေ့လာခဲ့ရဘဲ ကြောက်စရာ ကျက်စာတစ်ရပ် အနေနဲ့ အလွတ်ကျက်ပြီး ဖြေခဲ့ ကြရတဲ့ ကျောင်းသား တွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။
ကျွန်မရဲ့အဘွားကို အဘိုးက သမိုင်းပါမောက္ခလို့ နောက်ပြီးခေါ်ပါတယ်။ ကလေးပုံပြင် စာအုပ်ထဲက ပုံပြင် များကို ဘယ်တော့မှ မပြောဘဲ သူသိတတ်သမျှ သမိုင်းကြောင်းများဟာ ကျွန်မတို့လို မြေးများအတွက် အိပ်ရာဝင် ပုံပြင် များ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အဘွားဆိုတော့ ကျောင်းက ဆရာမလို ကြောက်စရာလဲ မလို၊ ကိုယ့် ကိုလဲ စကားသွက်တဲ့ မြေးဆိုပြီး သိပ်ချစ်တဲ့ အဘွားက မေးသမျှကို မငြီးမငြူ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖြေပေးပါ တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မဟာ သမိုင်းကို အိပ်ရာဝင် ပုံပြင်အဖြစ် လေ့လာနိုင်ပြီး အမှတ်ကောင်း ရခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အထက်တန်းရောက်တော့ ပြဿနာ စပါရော.. ဆရာပေးတဲ့ မေး၊ ဖြေတွေကို အလွတ်မကျက် ဘဲ ပြန် ဝေဖန် ဆန်းစစ် မိတဲ့အတွက် တက်တဲ့ ပြဿနာပါ။ ဆရာနဲ့ ကျွန်မကြားက ပြဿနာ မဟုတ်ပါ ဘူး။ ဆရာနဲ့ ကျွန်မက တစ်ဘက် ပညာရေးစနစ်က တစ်ဖက် တက်ကြတဲ့ ပြဿနာ ပါ။ န၀မတန်းမှာ အတန်းထဲက မိနစ် ၂၀တွင်း အကြိုက်ဆုံး သီချင်းတစ်ပုဒ် ခေါင်းစဉ်နဲ့ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲမှာ ကျွန်မကို အားရခဲ့တဲ့ မြန်မာစာ ဆရာ အတန်းမှူးနဲ့ ဒသမတန်းက မြန်မာစာ ဆရာတို့က ကျွန်မကို အတော် အားထားခဲ့ကြရှာပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ကျောင်းက မြန်မာတပြည်လုံး ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ စသဖြင့် ဗိုလ်စွဲနေကျမို့ သူတို့က ကျွန်မကို မြန်မာစာ နေရာမှာ တော်တော် အားကိုးခဲ့ကြတာပါ။
ပြဿနာ က မိဘုရားဖွားစော ကျောက်စာပါ။ မိဘုရားဖွားစော ကျောက်စာကို သင်ဖို့မှာ ဖွားစောကို အလှူဒါန အတွက် တော်တော် အမွှမ်းတင် ပေးရပါတယ်။ ကျွန်မက ဆရာများ ပေးတဲ့ ဒီလိုမေး၊ ဒီလိုဖြေ စနစ်ကို မလိုက်နာ ပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ဖြေပါတယ်။ ကျွန်မကို ဒီလို မဖြေဖို့ ဆရာများက နားချရှာပါတယ်။ ၀န်ကြီးဌာနက ထုတ်ပေးတဲ့ ဆရာလက်ကိုင် သင်ရိုးကိုတောင် ဆရာများက ကျွန်မကို ငှားရှာပါတယ်။ သင်ရိုးနဲ့ အညီ ဖြေမှ အမှတ်ကောင်းမှာမို့ ကျွန်မကို မြန်မာစာ အမှတ် အကောင်း ဆုံးဆု ရစေချင်လို့ပါ။ တနိုင်ငံလုံးက ဆယ်တန်း ကျောင်းသားများ ရင်ခုန်တဲ့ အခြေခံပညာ အထက်တန်း စာမေးပွဲမှာ မြန်မာစာမှာ မိဘုရားဖွားစော ကျောက်စာမှ ရရှိသော ဖွားစောရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကို မေးပါ တယ်။ ကျွန်မကလဲ ခေါင်းမာစွာနဲ့ ကျွန်မ ယုံကြည် လက်ခံတဲ့ အတိုင်း ဖြေပါတယ်။ စာမေးပွဲခန်းက ထွက်လာတဲ့ ကျွန်မကို ဆရာက သမီးဖြေနိုင်လားတဲ့ မေးရှာပါ တယ်။ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ သမီး သိပ်ဖြေနိုင် ပါတယ် ဆိုတော့ ဘယ်အပုဒ်ကိုဖြေလဲတဲ့။ ဖွားစောကျောက်စာကို ဒီလို ဖြေလိုက် တယ် ဆိုတော့ ဆရာက သက်ပြင်းချရင်း ခေါင်းယမ်းရှာပါတယ်။ ကျွန်မ မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ မြန်မာစာကို ကျွန်မ ဂုဏ်ထူး ထွက်ခဲ့ပေမယ့် ဆရာတွေ မျှော်မှန်းတဲ့ အမြင့်ဆုံး အမှတ်နဲ့ လွဲခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မ ဘယ်လိုဖြေခဲ့လဲ ဆိုတော့ လှူချင်တန်းချင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပီပီ ဘာသာတရားကို သက်ဝင်ယုံကြည် ပြီး ကောင်းတဲ့ တခြား အချက်တွေ သူ့စိတ်ထဲမှာ အများကြီး ပါပေမယ့် ဆိုးတဲ့ စိတ်ထားအနေနဲ့
မိဘုရားဖွားစောဟာ သူ့ကျောက်စာတစ်မျက်နှာမှာ ငါ ဆယ့်ရှစ်လုံး ပါအောင် ငါချင်းထပ် ကျောက်စာ ရေးထိုး ခဲ့တဲ့အတွက် ငါစွဲ ငါမာန် ကြီးကြောင်း
အလှူကို ကျောက်ထက် အက္ခရာ တင်ရာမှာ ငါ့လင်မင်းကြီး၊ ငါ့သားမြေးကြီး၊ ငါ့မြေးမင်းကြီးလို့ မင်းမျိုး ဖြစ်ရ တာကို အမွှမ်းတင်နေခဲ့ပေမယ့် သူ့ဖခင် လယ်သမားကြီးကို ကျောက်စာမှာ မတွေ့ရတဲ့အတွက် မိဘကျေးဇူးနဲ့ ဘ၀ဟောင်းကို မေ့ပြီး ရွှေနန်းစည်းစိမ် ကိုသာ သာယာမက်မောသူလို့ ကောက်ချက် ချနိုင်ကြောင်း
မြေးတောင် ဘုရင်ဖြစ်နေချိန်မှာ သူ့အသက်ဟာ တော်တော် အိုနေပြီလို့ တွက်လို့ရပေမယ့် အလှူအတန်း လုပ်ပြီး သူ့အတွက်ကိုသာ လူစည်းစိမ်၊ နတ်စည်းစိမ်ကိုသာ အဓိက ထားပြီး တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက် သိင်္ဃသူ့သမီး ကျောက်စာ နဲ့ အနှစ်သာရ လွန်စွာ ခြားနားနေကြောင်း၊ မင်းစည်းစိမ်ကို တော်တော် ယစ်မူး သာယာနေသည်မှာ ထင်ရှားနေကြောင်း
ကျောက်စာကို ဖတ်ပြီး ဘယ်အလှူက ဘာအတွက်လို့ စီမံခန့်ခွဲပုံကို တွေ့ရတဲ့အတွက် အသေးစိတ် စီမံ ခန့်ခွဲ လိုစိတ် ပြင်းပျသည်ကို တွေ့ရကြောင်း၊ ပုဂံ နန်းတွင်းရေး မှာလဲ တော်တော် စီမံခန့်ခွဲ ခဲ့တယ်လို့ ယူဆရကြောင်း၊ သူ့လက်ထက်မှာပဲ တရုတ်ပြေးမင်း ရာဇ၀င် တွင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ပုဂံထီးနန်း ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ အတွက် သူ့စနက်နဲ့ သူ့ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်ကို သံသယ ရှိဖွယ် ဖြစ်ကြောင်း
အဲလို ဖြေလိုက်မိပါတယ်ရှင်။ အဲလို အဖြေကို ဘာလို့များ မနှစ်မြို့နိုင်ရတာပါလိမ့်။ ဘာလို့များ အမှတ် မပေးနိုင် ရတာပါလိမ့်။ ဘာလို့များ အဲလို မဖြေစေချင်ရတာပါလိမ့်။ ကျွန်မကတော့ ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကို အမှတ်နဲ့ မလဲ နိုင်ပါ။ အမှတ်နည်း ခဲ့ရတဲ့ အတွက်လဲ ကိစ္စမရှိပါ။ သို့သော် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် အုပ်ချုပ်သူ ဘုရင်မျိုး ဘာလုပ်လုပ် ကောင်းပါတယ် လို့ချည်း ဘာကြောင့် ခုထိ လက်ခံကျင့်သုံးကာ ပညာရေးတွင် ပြဌာန်း ထားရပါသနည်း။ ဒါအပြင် ရာဇ၀င် ဆရာ အဆက်ဆက်တို့ကလဲ လယ်သူမ ဘ၀ကနေ မင်းသုံး ဆက် မိဘုရားကြီး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖွားစောကို အမွှမ်းချည့် တင်ထားကြပါတယ်။ သာမန် အညတြ အိမ်တွင်းအောင်း ကျွန်မ အနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် တစ်ထောင် ခန့်က မိဘုရား ဖွားစောကို မနာလိုစရာ အကြောင်း မရှိပါဘူးနော်။
မင်းဆိုတာ သမုတိနတ်မို့ စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားကောင်းဘူး ဆိုတဲ့ စကားကို ကြားရတော့ ပြုံးမိပါတယ်။ မြတ်စွာ ဘုရားက သူ့ကိုတောင် သူ့စကားကို မျက်စိမှိတ် မယုံဘဲ ဝေဖန်ဖို့ ကာလာမသုတ်မှာ ဟောကြားခဲ့မှတော့ ဝေဖန် ဆန်းစစ်တာကို ပြစ်မှားတာလို့ ယူဆလို့ မရကြောင်း ထင်းထင်းကြီး တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သုံးလောက ထွတ်ထား ဘုရားရှင်က သူ့ကိုတောင် ဝေဖန် ဆန်းစစ်တာ လက်ခံရင် မင်း ဆိုတာ သမုတိ နတ်မကလို့ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဘုရား ထက်တော့ အများကြီး နိမ့်တာ လူတိုင်း သိပါတယ်။ ဝေဖန် ဆန်းစစ် မခံနိုင်တာ မခံရဲတာ ဘာလို့ပါလိမ့်။
မြတ်စွာဘုရားကို ကျွန်မတို့ ယုံကြည် ကိုးကွယ် နေသည်မှာ သူက ဘုရားဖြစ်နေသောကြောင့် သူဘာလုပ်လုပ် အကောင်းထင်ပြီး ကျွန်မတို့က ယုံကြည် ကိုးကွယ် နေခြင်း မဟုတ်ပါ။ ဓမ္မစကြာ တရားဦးလေး ဟောဖို့အရေး တပည့်သာဝကများက သူ့ဆီသွားပြီး ဆည်းကပ်သည် မဟုတ်၊ ဘုရားရှင်က တပည့်သာဝက များထံ သွားပြီး တရားဟော ရရှာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတောင် ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ ငါးပါးက ဘုရားလို့ လက်မခံပါဘူး။ ငါ့တရားကို နာပြီးမှ ငါ့ကို ဆုံးဖြတ်ဟု ဆိုကာ တရားဟောရင်း တရားအဆုံးမှာ ပဉ္စ၀ဂ္ဂီ ငါးပါးလုံး ရဟန္တာ ဖြစ်ပြီး မြတ်စွာဘုရားကို ဘုရားဟု လက်ခံ လိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ သူဟောသော တရား၊ သူ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ကျွန်မတို့က သူ့ကို ဘုရားဟု သတ်မှတ် ကိုးကွယ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူက ဘုရားဖြစ်နေလို့ ကျွန်မတို့က သူ့တရားကို လက်ခံတာ မဟုတ်ပါ။ ထို့အတူ မြတ်စွာဘုရားရှင် လက်ထက်က လူများကလည်း ကျွန်မတို့နည်းတူ တရားကို နာပြီးမှ ဘုရားဟု လက်ခံ ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူထုရဲ့ ယုံကြည်လက်ခံမှုကို အာဏာနဲ့ ရယူခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ မဟာ ကရုဏာတော်နဲ့သာ ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ငါဟောလို့ ဆိုပြီးလဲ မျက်စိမှိတ် မယုံလိုက်ပါနဲ့ဦးလို့တောင် အတိအလင်း မိန့်ဆို ဟောကြားပြီး သတ္တ၀ါတို့ရဲ့ ပညာမျက်စိ အလင်းဓာတ်ကို ဖွင့်ပေးခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ခိုးတော် အနန္တရှင် ဖြစ် လျက် လူအများ ဘုရားရဲ့ တရားကို ယုံဖို့ တန်ခိုးနဲ့ မလုပ်ခဲ့ဘဲ အပင်ပန်းခံပြီး ၄၅နှစ်တိတိ တရားဟောပြ ဆုံးမ တော် မူခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လဲ မြတ်စွာဘုရားက ကာလာမသုတ်တွင် ဒီလို ဟောကြားခဲ့ရင်း သူတရားတော် များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တလောကလုံးကို စိန်ခေါ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
“ ကာလာမ မင်းတို့ ၊ သင်တို့မှာ ယုံမှားသံသယ ဖြစ်သင့်ပေ၏ ။ သင်တို့သည်
(၁) ပြောသံ ကြားကာမျှဖြင့် ဟုတ်ပြီ ။ မှန်ပြီ ဟု အတည်မယူကုန်လင့်ဦး။
(၂) အစဉ် အဆက် စကားများဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။
(၃) ဤသို့ ဖြစ်ဖူသတတ်ဟူသော စကားမျှဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။
(၄) ပိဋကတ်စာပေ နှင့် ညီညွတ်ပေသည် ဟူ၍လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။
(၅) ကြံဆတွေးတော၍ ယူခြင်းမျှဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။
(၆) အခြင်းအရာကို “ ကြံစည်” သော အားဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး။
(၇) မှတ်ယူထိုက်သော သဘောမျှဖြင့်လည်း မယူကုန်လင့်ဦး ။
(၈) ငါတို့လေးစားသော ရဟန်း၏ စကားဟူ၍ လည်း မယူကုန်လင့်ဦး ။
(၉) ဤတရားတို့ကား အကုသိုလ်တရား ။ အပြစ်ရှိသော တရား ။ ပညာရှိတို့ ကဲ့ရဲ့အပ်သော တရားတည်း ။ထိုတရားတို့ကို ကျင့်သုံးပါက အစီးအပွားမရှိခြင်ငှာ ၊ ဆင်းရဲခြင်းငှာ ။ ဖြစ်ကုန်၏ ဟု သင်တို့သည် “ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ” သိသော အခါ၌ ယင်းတို့ကို စွန့်ပယ်ရာ၏ ။
(၁၀) ဤတရားတို့ကား ကုသိုလ်တရား ။အပြစ် မရှိသော တရား ။ ပညာရှိတို့ ချီးမွမ်းအပ်သော တရားများဖြစ်၍ ယင်းတို့ကို ကျင့်သုံးပါက အစီးအပွားရှိသည် ချမ်းသာခြင်းငှါ ဖြစ်သည်ဟု “မိမိ ကိုယ်တိုင် ” သိသော အခါ၌ မူ သင်တို့သည် ယင်းတို့နှင့် ပြည့်စုံ နေကုန်ရာ၏ ။
( အဂုင်္တ္တရနိကာယ် ။ တိက နိပါတ် ။ မဟာ ဝဂ် ကေသ မုတ္တိသုတ်)
ဒါကြောင့် အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားများ အနေနဲ့ မှတ်ကျောက် တင်ခံနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးက မှတ်ကျောက်ကို ပစ်ပယ်၊ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားကို ကောင်းကွက်ချည့် ရှာခိုင်း၊ အမွှမ်းတင်ခိုင်းတာ၊ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားဖက်ကိုချည့် စဉ်းစားပေးခိုင်းပြီး အုပ်ချုပ်ခံ လူတန်းစားရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ဘ၀ဒုက္ခတွေကို လျစ်လျူရှုနေတာကို ၀မ်းနည်းစွာ တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ အုပ်ချုပ်သူရော အုပ်ချုပ်ခံပါ လူသားတွေ၊ အမိမြေရဲ့ နိုင်ငံသားတွေချည့်ပါပဲ။ ဒီလို ပညာရေးစနစ်ကြောင့် ဒီလို အုပ်ချုပ်ရေး စနစ် ဖြစ်လာတာလား ဒီလို အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်က ဒီလို ပညာရေးစနစ်ကို သင်ကြားစေတာလား စဉ်းစားစရာပါ။ သင်သာ အုပ်ချုပ်သူ နေရာရောက်ရင် ဘယ်လို စဉ်းစားမလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်း ထက် သင်သာ ဒီလို အုပ်ချုပ်ခံရရင် ဘယ်လို စဉ်းစားမလဲ ဆိုတာလေးကိုလဲ တပြန်တလှည့် တွေးပေးကြဖို့ ကောင်းပါတယ်။ လူမျိုးတူချင်း၊ လူသားချင်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးများ ရှိကြရင် ဒီလို ၂ဦး၂ဖက် လုံးအတွက် မျှတတဲ့ အတွေးလေးများ ၀င်ကြရင် ရေးရကျိုး နပ်ပါပြီ။ ကျွန်မရဲ့ ဆောင်းပါးလေးကိုလဲ ကာလာမ သုတ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဝေဖန်ပေးကြပါဦးနော်…
အခုအပတ်တွေက ယူကေ တက္ကသိုလ်တွေရဲ့ ကျောင်းဖွင့်ရာသီပါ။ ကျောင်းဖွင့်ရာသီတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဆရာ၊ ဆရာမတွေရော၊ သုတေသန ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပါ ဖတ်လက်စ စာအုပ်တွေဘေးချ၊ ရေးလက်စစာတမ်းတွေ အသာခေါက်ပြီး အလုပ်များကြရပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေအတွက် course advisor appointment တွေ၊ သင်ရိုးတွေ၊ reference တွေကို update လုပ်တဲ့ meeting တွေ၊ ဘာသာရပ်အလိုက် course co-ordinator တွေနဲ့ lecturer တွေ၊ Teaching Assistant တွေရဲ့ သီးသန့်တွေ့ဆုံပွဲတွေ၊ ပါဝင်ထားတဲ့ society အဖွဲ့တွေရဲ့ welcome party စတာတွေနဲ့ ကျောင်းလောကမှာ ဒီအချိန်ရယ်၊ စာမေးပွဲချိန်တွေရယ်ဟာ အလုပ်ရှုပ်ဆုံးပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ယူကေမှာက များသောအားဖြင့် tutorial ချိန်တွေ တာဝန်ယူဖို့ tutor တွေ ခန့်လေ့ သိပ်မရှိပါဘူး။ (PhD, MPhil, MLitt, MRes) စတဲ့ သုတေသနကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေကိုပဲ Teaching Assistant တွေ ပြန်လုပ်ခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ သုတေသနကျောင်းသားတွေမှာ တက္ကသိုလ်ကနေ တိုက်ရိုက် studentship ပေးထားသူတွေ၊ Research Council တွေက studentship ပေးထားသူတွေ၊ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် တက်နေသူတွေစသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ အားလုံးထဲမှာ တက္ကသိုလ်က studentship ယူထားသူတွေကတော့ အလုပ်ရှုပ်ဆုံးပါပဲ။ ပညာသင်ကြားစရိတ်၊ သုတေသနစရိတ်အပါအ၀င် သင့်လျော်တဲ့ နေစရိတ်၊ စားစရိတ် (အဲ-ကလေးငယ်ရှိရင် ကလေးထိန်းစရိတ်) ပါပေးပြီး၊ အပူအပင်မရှိ ပညာဆုံးခန်းတိုင်အောင် တာဝန်ယူပေးပါတယ်။ အပြန်အလှန် အနေနဲ့ တပတ်မှာ ပျမ်းမျှ (၆)နာရီခန့် ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းတွေရဲ့ tutorial ချိန်တွေမှာ တာဝန်ယူပေးရပါတယ်။ ကျောင်းဖွင့်ချိန်၊ စာမေးပွဲချိန်တွေမှာလဲ လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလို တာဝန်ယူပေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် tutorial မဟုတ်တဲ့ တခြား အချိန်တွေအတွက် သင့်တင့်တဲ့ လုပ်အားခကို ထပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ စာမေးပွဲခန်းစောင့်ရင်လဲ အခန်းစောင့်ကြေး အပိုဆောင်းပေးပါတယ်။ လူတယောက်ရဲ့ လုပ်အားနဲ့ အချိန်ကို အလွန်ပဲ တန်ဖိုးထားတတ်ကြပါတယ်။
ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ ဘ၀ရှေ့ရေးကိုလဲ အတော်ဂရုစိုက်ကြတယ်။ ကျောင်းစဖွင့်ချိန်မှာ ကျောင်းသားတိုင်း မဖြစ်မနေ လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကတော့ course advisor နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်းပါ။ ပါမောက္ခတွေ၊ ကထိကတွေကိုယ်တိုင် တယောက်စီကို သေချာတွေ့ဆုံပြီး သူတို့ major ယူထားတဲ့ ဘွဲ့အတွက် လိုအပ်မယ့် credit points တွေ၊ တခြားရွေးချယ်ယူနိုင်တဲ့ minor ဘာသာရပ်တွေကို သေချာရှင်းပြ၊ မေးခွန်းတွေဖြေနဲ့ တယောက်ကို အနဲဆုံး (၁၅) မိနစ်ခန့် အချိန်ပေးကြပါတယ်။ Economics တက်မယ့်သူကလဲ chemistry ကို minor ယူချင်ယူတာပါပဲ။ Economics ကို Physics နဲ့ joint honors တက်သူလဲ ရှိတာပါပဲ။ အရေးကြီးတာက ကျောင်းသားရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုပါ။ သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့် ပေးခြင်းအားဖြင့် ပညာသင်ကြားရေးကို လွယ်ကူ ချောမွတ်စေသလို၊ သူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလဲ အမြဲတက်ကြွနေပါတယ်။ ပညာကို လိုချင်စိတ်ရှိနေပါတယ်။
ဘွဲ့ရပြီးသားသူတွေထဲက သူတို့ရပြီးသားဘာသာရပ်ကို ဘွဲ့လွန်ဆက်မသွားချင်တော့လို့ စိတ်ဝင်စားမှုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ career change ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားဘွဲ့တခုကိုပဲ ပထမနှစ်ကနေ စတက်သူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ တချို့ဆို အသက် ခြောက်ဆယ်ကျော်နေပါပြီ။ ပင်စင်ယူပြီးမှ ပညာရပ်အသစ်တခုကို ထပ်လေ့လာနေတာပါ။ “ပညာလို အိုသည်မရှိ” စကားပုံလေးကို သွားသတိရမိပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ “ဘွဲ့တခုရရင် ပြီးရောပေါ့။ ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲ” ဆိုတဲ့ အတိတ်တုန်းက ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ စကားသံတွေကို သွားသတိရမိပါတယ်။
ပညာရေးမှာ အတတ်ပညာကအဓိကလား၊ အသိပညာက အဓိကလား၊ အတန်းပညာက အဓိကလား၊ ဘ၀ပညာက အဓိကလားဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ အခု argue မလုပ်ချင်သေးပါ။ ဒါပေမယ့် United Nations Development Programme (UNDP) ကနေ လူတယောက်ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တိုင်းတာတဲ့ Human Development Index (HDI) အချက်တွေထဲက တခုဖြစ်တဲ့ Knowledge ကိုတော့
(2/3* adult literacy rate + 1/3 * mean years of schooling) ဆိုတဲ့ formula လေးနဲ့ တွက်ချက်တာ တွေ့ရပါတယ်။
နိုင်ငံတခုရဲ့ Economic Growth အတွက် Technology နဲ့ Human Capital (Education) ဟာ ၂၁ရာစုရဲ့ အရေးကြီးဆုံး ကဏ္ဍတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း နိုင်ငံတိုင်း၊ နိုင်ငံတိုင်းမှာ Education ကို အလွန်ပင် ရှေ့တန်းတင် နေရာပေးကြပေမယ့် ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်မှာကတော့ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရဲ့ ရာနှုန်းအနည်းငယ်မျှကိုပဲ ဒီကဏ္ဍမှာ သုံးလေ့ရှိတယ်။ သုံးတဲ့ရာနှုန်းအနည်းငယ်မှာလဲ ရှိပြီးသား တက္ကသိုလ်ကြီးတွေကို အသုံးမပြုပဲ တက္ကသိုလ်အသစ်တွေကို မလိုတဲ့နေရာမှာ ဆောက်လိုဆောက်နဲ့ ဖြုန်းပစ်ပြန်ပါတယ်။ အခြေခံပညာရေး၊ အဆင့်မြင့် ပညာရေး နှစ်ခုစလုံးမှာ စနစ်ကျတဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေ၊ သင်ထောက်ကူတွေ မရှိပြန်ပါဘူး။ ပညာရှင်တွေကို ပညာရှင်တွေလို မဆက်ဆံပြန်တော့ brain drain ပြဿနာကလဲ အရမ်းကို ကြီးမားပါတယ်။
ပညာရေးလောကထဲကို academic တယောက်အနေနဲ့ ၀င်လာပြီဆိုကတည်းက သူတို့ဆီမှာ ပညာရပ်ကို စိတ်ဝင်တစား နှစ်သက်မြတ်နိုးမှုတွေ ရှိကြစမြဲပါ။ လူ့ဘောင်လောကကို အကျိုးပြုနိုင်မယ့် သုတေသနတွေ လုပ်ချင်မယ်၊ ပညာကို မျှဝေပေးချင်မယ်၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ conference တွေ၊ workshop တွေ လုပ်ချင်မယ်၊ research institute တွေ ထောင်ချင်မယ်၊ တိုင်းပြည်အတွက် မိမိပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရှုထောင့်ကနေ လိုအပ်ချက်တွေ တွေ့ရင် တင်ပြဆွေးနွေးချင်မယ် စိတ်တွေ ရှိနေကြပါမယ်။ ဒီလိုလူတွေကို ၀ါဒရေးရာ အဖွဲ့တွေထဲ အတင်းဝင်ခိုင်း၊ ဘာတွေမှန်းမသိတဲ့ စာရွက်စုတ်တွေ လက်ထဲထိုးပေးပြီး လူထုစည်းဝေးပွဲတွေ တက်ပြောလိုပြောခိုင်း၊ ကျောင်းသားတွေကို watchdog လုပ်ခိုင်းလိုလုပ်ခိုင်း၊ အရည်အချင်းအတိုင်းမဟုတ်ပဲ အအောင်ပေးခိုင်းလိုပေးခိုင်းတွေ လုပ်လာတဲ့အခါ၊ သုတေသနဆက်ပြုဖို့လဲ အခွင့်အရေးတွေ မရှိတဲ့အခါ ဘယ်လိုပညာရှင်မျိုးကမှ နေချင်စိတ်ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့ ပါရဂူဘွဲ့ရသူဆိုတာကတောင် အဲဒီပညာရပ်ကို နားလည်စပြုစပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ဆိုကြတယ် မဟုတ်ပါလား။ မြန်မာပြည်က ပညာရေးကဏ္ဍ ဖျက်ဆီးခံရမှုအကြောင်းကိုတော့ နောက်ပိုင်းမှ data တွေနဲ့ သုတေသန ပြုပါဦးမယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုယ်တွေ့ပညာရေး အကြောင်းလေးကို အနည်းငယ် မျှဝေခွင့်ပြုပါ။ မြန်မာပြည်မှာ study guide လုပ်ဖူးတာလေးတွေ၊ ကျူရှင်သင်ဖူးတာလေးတွေပဲ ရှိတာမို့ ပညာရေးစနစ်ထဲက ဆရာ အတွေ့အကြုံတော့ မရှိခဲ့ပါ။ ကျောင်းသားအတွေ့အကြုံပဲ ရှိတာမို့ အဲဒီအကြောင်းလေးတွေကိုပဲ ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့ ရေးသားချင်ပါတယ်။
အခြေခံပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အဖြစ်အပျက်လေးတချို့ကို ပြန်သတိရမိပါတယ်။ တချို့က ပညာရေးစနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး၊ တချို့ကတော့ သင်ကြားရေးပုံစံနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။
ကျွန်မအခြေခံပညာရေး သင်ယူခဲ့ရတာက နယ်မြို့လေးတစ်ခုမှာပါ။ ပထမဆုံးမှတ်မိနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ မတိုင်ခင် ၁၉၈၇ ခု ကာလမှာပါ။ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မ (၃)တန်းပါ။ တနေ့မှာတော့ ဆရာမနဲ့ ကျွန်မ ပြဿနာတခုအကြီးအကျယ်တက်ပါတယ်။ သူသင်တဲ့ သင်္ချာပုစ္ဆာကို တခြားနည်းနဲ့ရော တွက်လို့မရဘူးလားဆိုပြီး ကိုယ်ထင်တဲ့နည်းကို ပြောမိရာက စတာပါ။ အဖြေကတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူသင်တဲ့နည်းအတိုင်းပဲ တွက်မှ အမှန်ပေးမယ်လို့ တဘက်သတ် စီရင်ချက်ချပါတော့တယ်။ ကျွန်မ ဆရာမကို စော်ကားနေတာမဟုတ်ပါ။ အနန္တောအနန္တ ငါးပါးမှာ တပါးအပါအ၀င်ပါ။ ကျွန်မပြောချင်တာက မြန်မာပြည်က စာသင်ခန်းတော်တော်များများဟာ ကျောင်းသားဗဟိုပြု မဟုတ်ပဲ၊ ဆရာ ဗဟိုပြု ဖြစ်နေတဲ့အချက်ကိုပါ။ တနေ့လုံး ဆရာတွေကချည်းပဲ ရှင်းလင်းသင်ကြားနေရတာဖြစ်တာမို့ ဆရာတွေအတွက်လဲ အလွန်ပင်ပန်းရသလို ကျောင်းသားတွေ အတွက်လဲ ပျင်းရိငြီးငွေ့စရာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ တွေးခေါ်မြော်မြင်မှုတွေ၊ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေး တွေကိုလဲ ထိခိုက်စေပါတယ်။ တစုံတခုလုပ်ရင် initiative မဖြစ်တော့ပဲ တယောက်ယောက်ကပြသပြီးမှ၊ တယောက်ယောက်က စလုပ်ပြီးမှ လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှုတွေ မရှိပဲ သင်ထားတဲ့အတိုင်း ကျက်မှတ်နေရတာဖြစ်လို့ သူတပါးခူးပြီးသားထမင်းကိုမှ စားတတ်တာလေးတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အဆိုးဆုံးကတော့ ပညာသင်ကြားသူနဲ့ ပညာသင်ယူသူကြားမှာ ကြောက်ရွံ့မှု စည်းတခု ခြားသွားတဲ့ ကိစ္စပါ။ ဆရာမကသင်၊ ကျွန်မတို့ကကျက်၊ နောက်တနေ့ စာပြန်၊ မရရင် ပြစ်ဒဏ်ဆိုတဲ့ ကြက်တူရွေးသင်ကြားရေးစနစ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဟာ အခုအချိန်အထိ ကျွန်မပေါ်ကို effect တခု သက်ရောက်နေဆဲပါပဲ။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေနဲ့ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးတဲ့အခါ မေးခွန်းမေးဖို့ ရှိန်နေတဲ့ ပြဿနာပါ။ ကိုယ့်ယူဆချက်ကို လွတ်လပ်စွာ ပြောဖို့ တခါတရံ နှုတ်နှေးနေတတ်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ intelligence ကို ဖော်ထုတ်ပေးပြီး၊ ဆရာနဲ့တပည့် အပြန်အလှန် ဆက်ဆံမှုတဲ့ ပညာသင်ကြားရေးပုံစံကို ပြောင်းလဲဖို့ လိုတယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
နောက်တခုကတော့ ၈၈ အရေးတော်ပုံ နောက်ပိုင်းကာလမှာပါ။ ဒီတခါကတော့ ကံကောင်းလို့ ကျောင်းထုတ်မခံရတာပါ။ ဖြစ်ပုံက (၆)တန်းမှာ သင်ရတဲ့ မြန်မာ့သမိုင်းဘာသာရပ်ဟာ ကျွန်မဖတ်ဖူးတဲ့ စာအုပ်ထဲက တချို့အချက်တွေနဲ့ကွဲနေတာကို သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောမိတာပါ။ အရေးတော်ပုံကာလမှာ ကျောင်းတနှစ်ပိတ်တော့ အဖိုးလက်ထက်ကတည်းက စုဆောင်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေဖတ်ဖို့ အချိန်ရသွားပါတယ်။ ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးလို့ပဲ ဆိုရမှာပါ။ အဲဒီမှာ နိုင်ငံရေးစာအုပ်တချို့လဲ ပါလေတော့ ကျောင်းမှာသင်တဲ့ သမိုင်းတချို့ဟာ တမျိုးပါလားလို့ စတွေးမိလာတယ်။ တွေးမိတဲ့အတိုင်း ရိုးရိုးလေးပြောတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မနိုင်ငံရေး ပြောနေပါတယ်ဆိုပြီး ကျောင်းက မိဘခေါ်တွေ့လိုတွေ့၊ အိမ်မှာ ကျွန်မအဖမ်းခံရတော့မှာပဲဆိုပြီး မိသားစုတွေက ငိုလိုငို၊ သူငယ်ချင်းတွေက ရှောင်လိုရှောင်၊ ဆရာမတွေက စောင့်ကြည့်လို စောင့်ကြည့်နဲ့ အတော်ဒုက္ခ များသွားရပါတယ်။ မြန်မာပြည်က သမိုင်းသင်ရိုးအမှားတွေကနေ ကျောင်းသားတွေပေါ် ရိုက်တဲ့ ဂယက်ပါ။ ပိုဆိုးတာက သမိုင်းမှားကြီးကို ဘုမသိဘမသိနဲ့ လက်ခံကြရတာကိုပါ။ တပ်မတော်ဆိုတာနဲ့ နိုင်ငံတော်ကယ်တင်ရှင်ကြီး ဆိုတာကို သမိုင်းကာလအဆင့်ဆင့်မှာ ရေးထားတာတွေ၊ ဖယ်ဒရယ်မူကို ပြည်ထောင်စု ဖြိုခွဲမယ့်မူအဖြစ်ရေးထားတာတွေဟာ သမိုင်းကြောင်းတွေ၊ နိုင်ငံတော်အရေးတွေမှာ မမှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေဆီကို ဦးတည်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါတွေကို အဟုတ်ထင်ပြီး၊ စစ်တက္ကသိုလ်သွားတက်ကြတဲ့ ကျွန်မသူငယ်ချင်းတွေ အများကြီးပါ။ သူတို့ တကယ်ကို မသိကြတာ၊ နားမလည်ကြတာကို တွေ့ရတယ်။ စနစ်ဆိုးက သင်ရိုးမှားတွေရဲ့ သားကောင်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ မျိုးဆက်လိုက်ကို ဂယက်ရိုက်စေတဲ့ ပညာရေးစနစ်အမှားမျိုးပါ။
နောက်ကိစ္စတခုကတော့ ကျွန်မရှစ်တန်းလောက်မှာ ကြုံခဲ့တာပါ။ ရှစ်တန်းမှာ ကျွန်မတို့ အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေးချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်။ ဂီတဖြစ်ဖြစ်၊ ပန်းချီဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်တွင်းမှုဖြစ်ဖြစ် ယူရပါတယ်။ ကျွန်မဆိုတာကတော့ မြန်မာပြည်မြေပုံတောင် မနည်း ဆွဲနေရသူဆိုတော့ ပန်းချီနဲ့ကလဲ မဖြစ်၊ ဂီတဆိုတာမှာလဲ ခံစားတတ်တာက လွဲရင် ဖန်တီးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင် (သီချင်းဆိုမိရင်တောင် ကိုယ့်အသံကြားပြီး ကိုယ်ပြန် စိတ်ညစ်ရသူ)ဖြစ်လေတော့ မယူနိုင်၊ အိမ်တွင်းမှုဆိုရာမှကလဲ အပ်ပေါက်ထိုးရမယ့်အစား တောထဲသွားပြီး ကျားနဲ့သာ တွေ့ပါရစေတော့လို့ ဆုတောင်းမိလောက်အောင် ဖြစ်ထွန်းမှု မရှိတဲ့သူုဖြစ်ပြန်နဲ့ အတော်ပဲ ဦးနှောက်ခြောက်ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ အကြံတခုရတာနဲ့ တသက်လုံးသော့ခတ်ပိတ်ထားခံရတဲ့ စာကြည့်တိုက်ထဲက စာအုပ်လေးတွေကို အဲဒီအချိန်မှာ ဖတ်ခွင့်တောင်းရပါတယ်။ စာကြည့်တိုက်ထဲက စာအုပ်ဆိုတာ ဖတ်ဖို့ ထားတာပေမယ့် စုတ်ပြဲပျက်စီးမှာ စိုးလို့ဆိုပြီး ဘယ်သူမှ ဖတ်ခွင့်မရှိပဲ သော့ပိတ်ချုပ်နှောင်ထားခြင်း ခံနေကြရပါတယ်။ စာအုပ်လေးတွေကို လွတ်မြောက်ခွင့် ပေးချင်ပေမယ့် တောင်းဆိုသူ ကျွန်မမှာရလိုက်တဲ့ ရလာဒ်ကတော့ ကျောင်းဘောလုံးကွင်းထဲမှာ အမှိုက်ကောက်ပါတဲ့၊ ဒါနဲ့ပဲ ကျွန်မလို တခြားဟာတွေ မလုပ်ချင်သူတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအချိန် အမှိုက်ကောက်ပွဲ စရတော့တာပါပဲ။ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေမှာ သူ့ဘာသာ စိတ်ဝင်စားရာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ဖော်ထုတ်ပေးဖို့လိုအပ်လှပါတယ်။
ပြီးတော့ စာကြည့်တိုက်ကိစ္စပါ။ အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာ ကျောင်းသားတွေကို တကယ်ဖတ်ခွင့်ပြုတဲ့ စာကြည့်တိုက်တွေ ရှိသင့်ပါတယ်။ အသိပညာပေးစာအုပ်တွေ ထားသင့်ပါတယ်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေ ရှိသင့်ပါတယ်။ အဲလိုမဟုတ်တော့ ကျောင်းသားတွေဟာ ပြင်ပအငှားဆိုင်တွေ ရောက်ကုန်ပါရော။ ပြင်ပအငှားဆိုင်တွေကို မကောင်းပြောတာမဟုတ်ပါ။ လူငယ်ထုအပေါ် တာဝန်ယူစိတ်ရှိတဲ့ ဆိုင်ထိုင်သူများကိုလဲ တွေ့ဖူးပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် ကျွန်မရဲ့ ကျောင်းပြင်ပ ဆရာတွေ၊ လမ်းပြကြယ်တွေလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်ကောင်းများစွာကို ညွှန်ပြပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူ့စိတ်လူ့မနောဆိုတာက အမျိုးမျိုးရှိလေတော့ တချို့ဆိုင်တွေက ပိုက်ဆံရရင်ပြီးရော၊ ကလေးဖတ်သင့်မဖတ်သင့်တွေကို စိတ်မ၀င်စားပဲ ငှားတတ်ကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက စာပေစိစစ်ရေးဆိုတာကလဲ နိုင်ငံရေး၊ ပေါ်လစီရေးကိုပဲ လုပ်နေကြပြီး အသက်ဘယ်နှစ်နှစ်အောက် မဖတ်ရ ဆိုတဲ့စနစ်မျိုးတွေလဲမရှိလေတော့ မဖြစ်သင့်တာတွေ ဖြစ်ကုန်တာတွေ ရှိပါတယ်။
တကယ်ဆို ကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေ စာပေနဲ့မွေ့လျော်တတ်အောင်၊ အသိပညာ တိုးပွားအောင် စာကြည့်တိုက်ဆိုတာတွေကို ကျောင်းတွင်းသာမက အရပ်ထဲတွေမှာပါ အများအပြား ဖွင့်ကြရမှာပါ။ စာအုပ်ပျက်စီးမှာမို့ စာပေးမဖတ်တာဟာ စာအုပ်တစ်ခုရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို အလေးမထားရာ ရောက်ပါတယ်။ စာအုပ်ဆိုတာ အလှပြပန်းကန်ပြားလေးတွေ၊ အလှပြငါးလေးတွေလို ထိုင်ကြည့်နေဖို့ ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မတော့ ယုံကြည်ထားပါတယ်။ စုတ်ပြဲပျက်စီးမှု မရှိအောင်လဲ စည်းကမ်းပြ လမ်းညွှန်ပေးလို့ ရပါတယ်။ စာရွက်တွေလှန်ရင် စနစ်တကျဘယ်လိုလှန်ရမယ်၊ ဖတ်ပြီး ခဏချထားချင်ရင် Bookmark လေးတွေနဲ့ ဘယ်လိုထားရမယ်၊ စာရွက်တွေ မခေါက်ရဘူး၊ စာအုပ်ကို ချချင်ရာမချထားရဘူး၊ မဖတ်တော့ရင် စနစ်တကျ စားပွဲပေါ် ဘယ်လိုပြန်တင်ရမယ် စသည်ဖြင့် ပြောဆိုသင်ပြထားလို့ ရတာပါပဲ။
အခုတော့ “ချီလွန်းရင်ချိ“ဆိုသလို ဟိုဟာမလုပ်ရ၊ဒီဟာမလုပ်ရ ဆိုတာတွေအောက်မှာ ခူးပြီးသားထမင်းတင်မက ၀ါးပြီးကျွေးတာကိုမှ စားချင်တဲ့ အခြေအနေကို ဆိုက်ရောက်ရတော့တာပါပဲ။ အထက်တန်းကျောင်းသား အရွယ်တွေအထိ မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ စာစီစာကုံးတွေကို အလွတ်ကျက်နေကြရတာဟာ ဒီစာကြည့်တိုက်တွေ အားနည်းမှုရဲ့ ဆိုးကျိုးရလာဒ်ပါပဲ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရေးမယ်ဆိုရင်တောင် ကိုးကားစရာ၊ လေ့လာစရာ resource တွေက limitation ဖြစ်နေပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ စာကြည့်တိုက်တွေ (မှတ်ချက်။ ပေါ်လစီရေးရာစာကြည့်တိုက်များ မဟုတ်ပါ) မြို့ရွာအနှံ့၊ ကျောင်းအနှံ့မပေါ်သေးသရွေ့ Human Capital Investment မှာ ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်ဟာ အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နေမှာပါပဲ။ ပညာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာလဲ နှောင့်နှေးနေမှာပါပဲ။
နောက်ကိစ္စရပ်တခု အမှတ်ရနေမိတာကတော့ ဆယ်တန်းကျောင်းသူဘ၀မှာ ကြုံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ ကျောင်းသားတဦးချင်းစီရဲ့ individual learning style နဲ့ ပတ်သက်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကျောင်းက နယ်ကျောင်းပေမယ့် အတော်ကို စည်းကမ်းကြီးပါတယ်။ အောင်ချက်ကောင်းအောင် ဆရာဆရာမတွေက စေတနာအရမ်းထားပြီး ကြိုးစားသင်ပေးကြပါတယ်။ ဒီအထဲမှာက အီကိုဆရာမကတော့ အသင်အပြလဲကောင်း၊ အရိုက်လဲကြမ်းတာကြောင့် အလွန်ကို နာမည်ကြီးပါတယ်။ ဒီဆရာမနဲ့ ကျွန်မနဲ့မှ ထိပ်တိုက်ကို တွေ့ခဲ့ရတာပါ။ ပြဿနာအစက ဒီလိုပါ။ ကျွန်မတို့ အထက်တန်းရောက်တဲ့နှစ်မှာပဲ နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ စေတနာဆိုတာကြီးကြောင့် သိပ္ပံနဲ့ ၀ိဇ္ဇာဘာသာရပ်တွေ ပေါင်းသင်ရတဲ့ ပညာရေးစနစ်သစ်ကြီးနဲ့ စတွေ့ကြရပါတယ်။ နဂိုကဆို မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ်၊ သင်္ချာ ဘာသာတွေပြီးရင် သိပ္ပံသမားကလဲ ဇီဝ၊ ဓာတု၊ ရူပသုံးဘာသာထပ်ယူ၊ ၀ိဇ္ဇာသမားကလဲ သမိုင်း၊ ပထ၀ီ၊ အီကိုသုံးဘာသာထပ်ယူနဲ့ စုစုပေါင်း ခြောက်ဘာသာ စီသာ သင်ကြရပါတယ်။ အဲ- ကျွန်မတို့လက်ထက်ကျတော့ သိပ္ပံဘာသာတွေကို ပေါင်းပြီးတဘာသာ၊ ၀ိဇ္ဇာဘာသာတွေကို ပေါင်းပြီး တဘာသာနဲ့ (၅)ဘာသာဆိုပေမယ့် (၉)ဘာသာ သင်နေရသလိုဖြစ်သွားပါရော။ ဟိုလဲစပ်စပ်စပ်စပ်၊ ဒီလဲစပ်စပ်စပ်စပ်နဲ့ ဘာမှကို ရေရေရာရာမသိရတဲ့ အဖြစ်မျိုးပါ။ သင်ရိုးတွေ ဖြတ်တောက် လျှော့ပေါ့ထားတယ်ဆိုပေမယ့် စနစ်တကျမဟုတ်ပဲ အခန်းတွေကျော်၊ အခန်းတွေပေါင်းနဲ့ ရောက်တတ်ရာရာတွေ ဖြစ်နေတာပါ။
ကျွန်မကလဲ ရောက်တတ်ရာရာဆို အလွန်ကို စိတ်ဆိုးတတ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရာတခုကို သေချာမသိပဲ ဟိုယောင်ယောင်၊ ဒီယောင်ယောင် အဖြစ်မျိုးကို ကျေနပ်တတ်သူ မဟုတ်ပြန်တော့ သင်ရိုးဟောင်းတွေပါ ပြန်လှန်နေတာနဲ့ တနေ့စာတနေ့ကျက်တဲ့ကိစ္စကို မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။ နံနက် (၇)နာရီဆို ကျူရှင်၊ (၈)နာရီခွဲကနေညနေအထိက ကျောင်း၊ပြီးတော့ ကျူရှင်နဲ့ ကျွန်မစာကျက်ချိန်ဟာ တနေ့ (၆)နာရီရဖို့ကို မနည်းဖျစ်ညှစ်ယူရတာပါ။ ဒီကြားထဲက သင်ရိုးဟောင်းတွေပါဖတ်ရ၊ မေးခွန်းဟောင်းတွေ လေ့ကျင့်ရနဲ့ဆိုတော့ ကျွန်မရဲ့ learning style ကို ကျွန်မကိုယ့်ဘာသာ ချရတော့တယ်။ တဘာသာတရက်စီ ခွဲကိုင်တဲ့နည်းပါ။ မြန်မာစာကိုင်တဲ့နေ့ဆို တခြားဘယ်စာအုပ်မှ မကိုင်တော့ဘူး။ အခုအချိန်အထိလဲ ဒီအကျင့်က စွဲနေပါပြီ။ တပတ်တခါ စနေနေ့တိုင်း ဒိုင်ယာရီမှာ ဘယ်နေ့ ဘာဖတ်မယ် ဆိုတာ plan ချထားပြီးမှ စာဖတ်၊ စာရေးလုပ်တတ်ပါတော့တယ်။ ဒီနည်းကစာတမ်းတွေ၊ Journal articles တွေ ဖတ်ဖို့အတွက် ပြီးလို့ပြီးမှန်းမသိအောင်ကို အလွန်ပဲ အသုံးဝင်လှပါတယ်။ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နဲ့ ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အဲ-အဲဒီတုန်းကတော့ ဒီ learning style ကို လုပ်နေချိန်မှာ ဆရာမနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့တော့တာပါပဲ။ ဆရာမကလဲ စေတနာနဲ့ပါ။ သူစာမေးတိုင်း မရတော့ ကျွန်မစိတ်လေနေတယ်လို့ထင်သွားတာဖြစ်မှာပါ။ learning style အဖန်တီးကောင်းတဲ့ ကျွန်မလဲ ဆရာမရဲ့ ကြိမ်ဒဏ်ကို လှလှကြီး ခံလိုက်ရပါတယ်။ တချက်လဲမဟုတ်၊ နှစ်ချက်လဲမဟုတ်၊ (၁၅)ချက်တိတိပါ။ တကယ်ကို အီစလံဝေခဲ့ရတာပါ။ ဒီနေရာမှာ ဆရာမလဲမမှား၊ ကျွန်မလဲ မမှားပါ။ မှားနေတာကတော့ ကြက်တူရွေးနှုတ်တိုက် ပညာသင်ကြားရေး စနစ်ပါ။ ဒီနေ့သင်၊ နက်ဖြန်အလွတ်ပြန် စနစ်ကြီးပါ။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ Teaching style မတူသလို ကျောင်းသားတွေရဲ့ learning style တွေလဲ မတူပါ။ ဖတ်မှတ်ပြီး၊ စာမေးပွဲရောက်မှ ခေါင်းထဲ ရှိတာတွေ ချရေးတတ်သူတွေ ရှိသလို အလွတ်ကျက်၊ ရေးချပြီး၊ စာမေးပွဲခန်းကထွက်တာနဲ့ တလုံးမှ ခေါင်းထဲ မကျန်တော့တဲ့လူတွေလဲ ရှိပါတယ်။ အဲ- စာမေးပွဲအောင်ဖို့က အဓိကလား၊ စာတတ်ဖို့ကအဓိကလားဆိုတာမေးလာခဲ့ရင်တော့အတော်အဖြေရကျပ်လှပါ တယ်။ ကျွန်မအမြင်ကတော့ စာတတ်ဖို့ရော၊ စာမေးပွဲအောင်ဖို့ရော နှစ်ခုစလုံးအဓိကကျတယ်လို့ပဲ ဆိုချင်ပါတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ စာမေးပွဲစစ်နည်း ဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်လှပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်မတို့ ဆယ်တန်းဖြေရစဉ်ကာလက စာမေးပွဲအကြောင်း သွားသတိရမိပြန်ပါတယ်။ ဘယ်လိုကဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိ၊ စပေါ့ဆိုတာတွေက အလွန်ပဲ ခေတ်စားလှပါတယ်။ စပေါ့မှာမှ အမျိုးမျိုး၊ နာမည်ကြီး ကျောင်းတွေရဲ့စပေါ့တွေ၊ ဘယ်ပါမောက္ခ၊ ညာပါမောက္ခတွေရဲ့စပေါ့တွေ၊ အထူးထုတ်တွေရဲ့စပေါ့တွေစသည်ဖြင့်ပါ။ အဲ-သံရုံးစပေါ့ဆိုတာလဲ ပါသေးရဲ့၊ အကျယ်မချဲ့လိုတော့ပါ။ သို့ပေမယ့် စပေါ့ပြဿနာကလဲ အတော်ပဲကြီးပါတယ်။ ဖြေရမယ့်ဘာသာကို ကိုယ့်ဘာသာ revision လုပ်ရမယ့်အစား ဖုန်းတခါလာတမျိုးနဲ့ မျက်ကလူးဆန်ပြာ မျောက်မူးလဲ ဖြစ်ကိန်းတွေပါ။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မအမေက တယ်လီဖုန်းကြိုးကို ဆွဲဖြုတ်ပြီး “ကျက်ချင်ရာသာကျက်၊ ကိုယ့်ဘက်ကကြိုးစားတဲ့တာဝန်ကျေပြီးပြီ၊ စပေါ့မတိုးလို့ မအောင်လဲ ကျေနပ်တယ်“ ပြောရတဲ့အထိပါပဲ။ မှတ်မှတ်ရရ၊ သင်္ချာဖြေတဲ့နေ့မှာ အခန်းထဲမ၀င်ခင် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က AABCBBA စသဖြင့် ၃၅လုံးတွဲကို အတင်းနှုတ်တိုက် သင်ပေးပါတယ်။ သင်္ချာပထမပိုင်းမေးခွန်းက ABCD ရွေးရတဲ့ (၃၅)မှတ်ဖိုး မေးခွန်းလေးတွေပါ။ သူစိတ်ချမ်းသာအောင် လိုက်မှတ်သွားပြီး၊ တွက်စရာတွေတွက်ပြီးတော့ သူ့ဟာလေးတိုက်ပြီး ရွတ်ကြည့်တယ်။ အမယ်-တယ်ဟုတ်ပါလားကွယ်ရို့။ ကွက်တိပါပဲ။ ဒါလေးနဲ့တင် နဲနဲဆက်တွက်လိုက်ရင် အောင်မှတ်ရနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။ သြော်- သင်္ချာကိုတောင် နှုတ်တိုက်ကျက်ဖြေရတဲ့ စာမေးပွဲမျိုးဖြစ်အောင် ဘယ်သူတွေကများ ဖန်တီးခဲ့ပါလိမ့်လို့ တွေးပြီး ပြုံးခဲ့မိသေးတယ်။ ရွှေသမင်ဘယ်ကထွက်၊ မင်းကြီးတာကထွက်။ ခေါင်မိုးမှ မလုံတာ၊ မိုးယိုတာကို အပြစ်တင်လို့ ရပါတော့မလား။
ဒါနဲ့တောင်ပြီးတာမဟုတ်ပါ။ နောက်ကိစ္စတခုက အောင်စာရင်းမထွက်ခင် ပေါ်လာပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့အခြေခံပညာရေး ကျောင်းသားဘ၀မှာ “The Whole Burma” ဆိုတဲ့ ကိစ္စကြီးက အတော်ကို ဂယက်ရိုက်တာပါ။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲမှာ မြန်မာတပြည်လုံးမှာ အမှတ်အများဆုံးရတဲ့ ကျောင်းသားဆယ်ယောက်ကို တခမ်းတနား ဆုပေးတဲ့ပွဲပါ။ ကျောင်းသားတွေတင်မက ကျောင်းတွေ၊ ဆရာမတွေ၊ ကျူရှင်ဆရာတွေပါ အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ကြရတဲ့ ကိစ္စပါ။ မိဘတွေမှာလဲ ဒီကိစ္စကိုပဲ ရင်တမမနဲ့။ မြန်မာပြည်မှာ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းမထွက်ခင်ကတည်းက စာစစ်သွားတဲ့ ဆရာမတွေကို လာဘ်ထိုးပြီး အမှတ်ကြိုကြည့်ကြတာက အစဉ်အလာကို ဖြစ်နေပါပြီ။ အမှတ်အခြေအနေကြည့်ပြီး ဆေး၊စက်မှုအမှတ်လိုနေရင် ဖြည့်ဆည်းတာ၊ အောင်မှတ်လိုနေရင် ဖြည့်ဆည်းတာတွေ လုပ်နေကြတာ ဆိုတော့ အမှတ်တွေတောင် တမှတ်ဘယ်လောက် ဆိုပြီး ဈေးပေါက်နေတာပါ။ အဲ- ကျွန်မအမှတ် ကြည့်ခိုင်းထားတဲ့ ဆရာမကတော့ The Whole Burma အမှတ်ဆိုပြီး ငွေ ဆယ့်ရှစ်သိန်းတောင်းပါတယ်။ အားလုံးအပြိုင်အဆိုင် လုပ်နေကြတာမို့ ပိုပိုလိုလိုလို့ ဆိုပါတယ်။ ကျွန်မဘာလုပ်ရမလဲ အသည်းအသန် စဉ်းစားရချိန်မှာတော့ မေမေက ကျွန်မရှေ့မှာ ငွေပုံတဘက်၊ Self-confidence လို့ ရေးထားတဲ့ စာရွက်တဘက်ကို ချပြီး ရွေးခိုင်းပါတော့တယ်။ ငွေပုံကို ရွေးလိုက်ရင် သေချာပေါက် The Whole Burma ဖြစ်မယ်၊ Self-confidence ကို ရွေးလိုက်ရင်တော့ ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မယ်၊ မဖြစ်ချင်လဲ မဖြစ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ငွေပုံကို ရွေးလိုက်တာနဲ့ ကျွန်မရဲ့ ကိုယ့်အစွမ်းအစကို ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့စိတ်ဟာ သုညဖြစ်သွားတော့မယ်ဆိုတာတွေ ရှင်းပြပြီး စဉ်းစားခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မငွေပုံတွေကို တွန်းဖယ်ပစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အတော်ကို စွန့်စားခဲ့ရတဲ့ ကိစ္စတရပ်ပါ။ အဲဒီတုန်းကသာ ငွေပုံကို ရွေးခဲ့ရင် ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ ပညာဆိုတာကို နှစ်နှစ်ကာကာ တန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်တွေ အခုလောက်ထိ ရှိလာပါတော့မလားလို့ သံသယဖြစ်မိတယ်။ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ၊ ကိုယ်ကျင့်တရားတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်တဲ့ ပညာရေးစနစ်မျိုးကို ကျွန်မအရမ်း မုန်းမိတာအမှန်ပဲ။
တကယ်တော့ စာမေးပွဲတွေမှာ အမှတ်ဝယ်ခွင့်ပေးထားတာ၊ စာကူးချခွင့် ပေးထားတာ၊ စပေါ့ ရောဂါကူးစက်အောင် ခွင့်ပြုထားတာတွေဟာ လူငယ်တွေရဲ့ ခြေလှမ်းကို ရပ်အောင်လုပ်လိုက်တာ၊ အသိဥာဏ်တံခါးတွေကို ပိတ်ပစ်လိုက်တာ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်နိုင်မှု စွမ်းအားတွေကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တာတွေပါပဲ။ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်တွေကို တစတစ ပျက်သုဉ်းပျောက်ကွယ်အောင် လုပ်ထားတဲ့ စီမံချက်တွေပဲလို့ ကျွန်မမြင်မိပါတယ်။
8 in 1 သင်ခန်းစာရေးဆွဲခြင်း မဟာဗျူဟာ
ဟိုတလောက “ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးများအား ထုတ်ဖော်သင်ကြားမှုအနုပညာ” ဆောင်းပါးထဲမှာ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်က ဒေါက်တာ ဟိုဝါ့ဒ်ဂတ်တနာနဲ့ သူ့ ရဲ့ သုတေသနအဖွဲ့ဝင်တွေ ခွဲခြားပြဆိုထားတဲ့ ဥာဏ်ရည်အမျိုးအစား (၈)မျိုးအကြောင်းကို ကျွန်မ ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဥာဏ်ရည် အမျိုးအစား (၈)မျိုးပေါ် အခြေခံပြီး သင်ခန်းစာများရေးဆွဲခြင်း မဟာဗျူဟာ နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမတခုကတော့ 8 in 1 ဆိုပြီး အားလုံးပေါ် အာရုံထား ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပြီး၊ နောက်တခုကတော့ intelligence တခုချင်းအပေါ်မှာ အာရုံထား ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးတစ်ခုကို ကျွန်မတို့ လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
၁) ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးဆိုင်ရာ ကိရိယာတန်ဆာပလာ သေတ္တာလေးတခု
ဥာဏ်ရည်တခုချင်းစီအလိုက် ထူးခြားသော စွမ်းအင်များ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဂါတ်နာဆိုသူ ပညာရေးသုတေသန ပညာရှင်တဦးကတော့ ဒီစွမ်းအားတွေကို ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးတွေရဲ့ ပင်မလုပ်ငန်းစဉ်များလို့ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးတခုချင်းဆီမှာ သက်ဆိုင်ရာ ဇီဝဖြစ်စဉ်နဲ့ အာရုံခံစားမှုဆိုင်ရာ စွမ်းအင်တွေ ရှိပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဒေးဗစ်လေဇီယာက သင်ခန်းစာတွေမရေးဆွဲခင်မှာ ပထမဆုံးလေ့လာသင့်တဲ့ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးဆိုင်ရာ ကိရိယာတန်ဆာပလာ သေတ္တာလေးတစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့သေတ္တာလေးထဲမှာ ပါဝင်တာတွေကတော့
(၁.၁) Logical/ Mathematical
သင်္ကေတများ၊ ဖော်မြူလာများ၊ တွက်ချက်မှုများ၊ ဆက်စပ်တွေးတောမှုများ၊ ဂရပ်ဖစ်ပုံများဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုများ၊ လျှို့ဝှက်စာဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း၊ ယုတ္တိဗေဒဆိုင်ရာ ကစားပွဲများ၊ နံပါတ်စဉ်များ၊ လိုရင်းအချုပ် ဖော်ပြခြင်းများ ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ ပါဝင်ပါတယ်။
(၁.၂) Verbal/ Linguistic
Creative Writing၊ သဒ္ဒါနည်းကျ ပြောဆိုခြင်း၊ ရယ်ရွှင်ဖွယ်ဟာသများ ပြောဆိုခြင်း၊ ဒိုင်ယာရီထားရှိသုံးစွဲခြင်း၊ စာပေဖတ်ရှူလေ့လာခြင်း၊ ကဗျာစာပေဖတ်ရှုခြင်း၊ ပုံပြင်များဖန်တီးပြောဆိုခြင်း၊ ကျပန်းစကားပြောခြင်း၊ စကားစစ်ထိုးပွဲကျင်းပခြင်း ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများပါဝင်ပါတယ်။
(၁.၃) Visual/ Spatial
ပုံဆွဲခြင်း၊ စိတ်ကူးယဉ်ပုံဖော်ခြင်း၊ အရောင်နှင့် စာလုံးပုံစံများရွေးချယ်ခြင်း၊ ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ ပန်းပုထုခြင်း၊ မျက်နှာပြင်တခုပေါ်တွင် စက္ကူ၊ အ၀တ်စ၊ ဓာတ်ပုံစသည်များ ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ခြင်း (collage) သင်ခန်းစာများ ပါဝင်ပါတယ်။
သဘာဝအသံများ၊ တူရိယာသံများ၊ သီချင်းရေးခြင်း၊ သီချင်းဆိုခြင်း၊ ဂီတသရုပ်ဖော်ခြင်း ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများပါဝင်ပါတယ်။
jigsaw ကစားခြင်း၊ အုပ်စုဖွဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ တဦးနှင့်တဦး မိတ်ဖွဲ့စကားပြောစေခြင်း၊ အခြားသူများ၏ ခံစားမှုများကိုနားလည်တတ်စေခြင်း၊ စုပေါင်းလေ့လာသင်ယူခြင်းဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများပါဝင်ပါတယ်။
အပင်နှင့် သတ္တ၀ါများအား ဂရုစိုက်လေ့လာခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အား စူးစမ်းခြင်း၊ မျိူးစိတ်များအားလေ့လာခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာရေး ခရီးထွက်ခြင်းဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများပါဝင်ပါတယ်။
ကိုယ်ဟန်အမူအရာ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအက၊ကာယပညာ၊ ကိုယ်လုံပညာ၊ အားကစားပြုလုပ်ခြင်း (ဘောလုံးကန်၊ ရေကူး၊ ကြက်တောင်ရိုက်ခြင်း) ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ ပါဝင်ပါတယ်၊
အာရုံစူးစိုက်ခြင်း၊ စနစ်တကျ တွေးခေါ်မြော်မြင်တတ်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုမြဲမြံစေခြင်း၊ တဦးချင်းစီအလိုက် ပရောဂျက်များ ဖန်တီးခြင်း ဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီသေတ္တာငယ်လေးကို သေချာလေ့လာပြီးမှ သင်ခန်းစာများ ရေးဆွဲဖန်တီးသင့်တယ်လို့ ပညာရှင်များက အဆိုပြုခဲ့ကြပါတယ်။
(၂) 8 in 1 သင်ခန်းစာ ရေးဆွဲပုံအဆင့်ဆင့်
သင်ခန်းစာများရေးဆွဲရာမှာ လိုက်နာရမယ့် အဆင့်များကတော့
(၂.၁) အကြောင်းအရာ၊ အချက်အလက်များအား အာရုံပြုခြင်း
သင်ခန်းစာမှာ ပါဝင်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ အချက်အလက်များကိုပဲ အာရုံထားရပါမယ်။ သင်ခန်းစာရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပြီး၊ သင်ရိုးညွှန်းတန်းတခုလုံးမဟုတ်ကြောင်း သတိပြုရပါမယ်။
(၂.၂) သင်ခန်းစာ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ အကျိုးရလာဒ်များအားဖော်ထုတ်ခြင်း
သင်ခန်းစာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများကို ဖော်ထုတ်ရေးသားရပါမယ်။ ဒီသင်ခန်းစာပြီးသွားတဲ့အခါ ကျောင်းသားတွေကို ဘာတွေသိစေချင်တာလဲ၊ ဘာတွေကို နားလည်စေချင်တာလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။
(၂.၃) ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးများဆိုင်ရာ ကိရိယာသေတ္တာငယ်အား အသုံးပြုခြင်း
သေတ္တာငယ်ထဲက အသုံးဝင်မယ့် ကိရိယာတန်ဆာပလာသင်ခန်းစာတွေကို ဥာဏ်ရည်တခုချင်းစီအလိုက် ရွေးထုတ်ရပါမယ်။ ရွေးချယ်နေစဉ်မှာ ကိုယ်ရေးဆွဲမယ့် သင်ခန်းစာရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို စိတ်ထဲမှာ ရှိနေပြီးမှ ရွေးချယ်ပါ၊ မဟုတ်ရင် အချက်အလက်တွေ ရှုပ်ထွေးကုန်တတ်ပါတယ်။
(၂.၄) ရွေးချယ်လိုက်သည့် အရာများအား မည်သို့သုံးစွဲမည်ကို အနက်ဖွင့်ခြင်း
ဥာဏ်ရည်တခုချင်းအလိုက် ရွေးချယ်ထားတဲ့ ကိရိယာတခုချင်းကို ဘေးမှာ ကွက်လပ်တွေချန်ပြီး ရေးချရပါမယ်၊ ပြီးတော့မှ အဲဒီကွက်လပ်တွေမှာ ကျောင်းသားတွေ ဘယ်လောက်ထိ ပါဝင်သင်ယူမှုရှိနိုင်တယ်၊ ဘယ်လိုသင်ထောက်ကူတွေ သုံးရမယ်၊ ကျောင်းသားတွေနားလည်အောင် ဘယ်လိုသင်မယ်၊ သူတို့နားလည်လက်ခံနိုင်စွမ်းကို ဘယ်လိုသုံးသပ်မယ် ဆိုတဲ့အချက်တွေကို အနက်ဖွင့်ရေးသားရပါမယ်။
(၂.၅) သင်ခန်းစာအချက်အလက်များအား အစီအစဉ်တကျ နေရာချခြင်း
ဒီအဆင့်ကတော့ နောက်ဆုံးအဆင့်ပါ။ သင်ခန်းစာအတွင်းမှာ ပါဝင်ရမယ့် learning activities များကို အစီအစဉ်တကျ နေရာချထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သတိပြုရမှာ တခုက သဘောသဘာဝအားဖြင့်ကို 8 in 1 မဟာဗျူဟာ ဟာ student-centered ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေအနေနဲ့ facilitator role ကနေ တာဝန်ယူရမှာပါ။ ကျောင်းသားတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးမျိုးစုံနဲ့ အကျွမ်းဝင်လာတဲ့အခါ ကျောင်းသားတွေကို သူတို့ဘယ် ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေးအပေါ်မှာ ထပ်ပြီး စူးစိုက်လေ့လာသွားချင်သလဲဆိုတာ မေးမြန်းရပါမယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကျောင်းသားတွေဟာ သူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို လေ့လာချင်စိတ်ပေါ်လာပါမယ်။ ဒီလိုဆိုရင် သင်ယူလေ့လာရေးရဲ့ အကြီးမားဆုံး တန်းတစ်ခုကို သူတို့ ကျော်သွားနိုင်ပါပြီ။ အဲဒါကတော့ motivation ပါပဲ။
(၃) 8 in 1 သင်ယူမှုဖြစ်စဉ်
8 in 1 ဖြစ်စဉ်ဟာ သင်ယူမှုနဲ့ သင်ယူသူတွေအပေါ်မှာ ကြီးစွာသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ခေတ်သစ် ဦးနှောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သုတေသနပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ ဟူစတန်၊ ဂျင်ဆင်၊ဆိုင်လ်ဝက်စ်စတာနဲ့ ၀ိုလ်ဖီတို့က သင်ယူမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကောက်ချက်တွေကို အခုလို ပေးခဲ့ကြပါတယ်။
၁။ လူတယောက်သည် တစုံတခုအား လေ့လာသင်ယူရန် နည်းလမ်းများပိုမိုရရှိလာလျှင် ထိုသူသည် အဆိုပါအကြောင်းအရာအား အမှန်တကယ် လေ့လာသည်။
၂။ ထိုနည်းတူစွာပင် လေ့လာသင်ယူရန် နည်းလမ်းများစွာ ရှိသဖြင့်၊ ထိုသူသည် အဆိုပါအကြောင်းအရာအား မှတ်မိသိရှိသွားသည်။
၃။ ထိုမျှမက လေ့လာသင်ယူရန် နည်းလမ်းများစွာရှိသဖြင့်၊ ထိုသူသည် အဆိုပါအကြောင်းအရာအား နားလည်သိမြင်သွားသည်။
8 in 1 မဟာဗျုဟာမှာဆိုရင် နည်းလမ်းမျိုးစုံ၊ သင်ထောက်ကူမျိုးစုံ ပါဝင်တာကြောင့် ကျောင်းသားတွေ သင်ခန်းစာကို နားလည်သိမြင်ပြီး၊ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေး ထူးခြားကောင်းမွန်လာနိုင်မယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်။ နောက်အားသာချက်တခုက ကျောင်းသားတွေကိုယ်တိုင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်၊ ဆရာတွေပြောတာတွေချည်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ထိုင်နားထောင်နေရင် passive recipient ပဲဖြစ်မှာပါ။ တကယ်တော့ ပညာရေးရဲ့ အဆုံးစွန် ရည်မှန်းချက်ဟာ passive recipient ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါ။ Lifelong Learner တွေဖြစ်လာဖို့ပါ။ 8 in 1 မဟာဗျူဟာဟာ Lifelong Learner အများအပြားကို မွေးထုတ်နိုင်တဲ့ ဗျူဟာကောင်းတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်၊
နောက်ပိုင်းကျမှ နောက်ထပ် မဟာဗျူဟာတမျိုးဖြစ်တဲ့ Intelligence-Focused သင်ခန်းစာရေးဆွဲခြင်း မဟာဗျူဟာလေးအကြောင်း ထပ်မံတင်ပြပါဦးမယ်။
Lazear, D. (2003) Eight Ways of Teaching: The Artistry of Teaching with Multiple Intelligences, Fourth Edition, Pearson Education, Glenview
Gardner, H. (1983) Frames of mind: The theory of multiple intelligences, Harper & Row, New York
Houston, J. (1982) The possible human: A course in extending your physical, mental and creative abilities, J.P Tarcher, Los Angeles
Sylwester, R. (2000) A biological brain inacultural classroom: Applying biological research to classroom management, Corwin Press, CA
Wolfe, P. (2001) Brain Matters: Translating research into classroom practice, Alexandria, VA
Free Education & Education Free
မြန်မာပြည် ပညာရေးအခြေအနေကို ထိထိမိမိပြသထားသော ကာတွန်းလေး ။
ဒီနေရာမှ ကူးယူ တင်ပြပါသည် ။
လူတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘာသာရပ် ၊ နည်းပညာတွေကို လေ့လာသင်ယူပုံ မတူညီကြဘူး ။ တချို့က လက်တွေ့ လုပ်မှ နားလည်သလို ၊ တချို့ကတော့ သီအိုရီတွေဖတ်ပြီး ၊ ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အဖြေတွေကို ပြန်စဉ်းစားပြီး လေ့လာတတ်တယ် ။ လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ learning style ကို သိတဲ့အခါ ၊ ကိုယ်ပိုင် အားသာချက် အားနည်းချက် တွေကို လိုသလိုအသုံးချပြီး ၊ လေ့လာသင်ယူရာမှာ ပိုထိရောက်နိုင်တယ် ။ ထိုနည်းတူ သင်ကြားပို့ချသူကလည်း ၊ ကိုယ့်အတန်းထဲကလူတွေရဲ့ ယေဘူယျ learning style တွေကို သိထားတဲ့အခါ ၊ အဲလိုအခြေအနေကို ဖန်တီးလို့ သင်ကြားပို့ချချက်တွေကို သင်တန်းသားတွေ ခပ်မြန်မြန် နားလည်နိုင်အောင် ပြုလုပ်နိုင်တယ် ။ ဒါကြောင့် Learning Style ဆိုတာဟာ အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍတခုဖြစ်တယ် ။
North Carolina State University မှ တင်ပြထားတဲ့ Index of Learning Style (ILS) ကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင် ။
The Index of Learning Styles is an on-line instrument used to assess preferences on four dimensions (active/reflective, sensing/intuitive, visual/verbal, and sequential/global) ofalearning style model formulated by Richard M. Felder and Linda K. Silverman. The instrument was developed by Richard M. Felder and Barbara A. Soloman of North Carolina State University.
ဒီနေရာကို သွားပြီး ၊ ကိုယ့် learning style ဟာ ၊ အဲဒီ4dimensions မှာ ၊ ဘယ်လိုအပိုင်းတွေ ကျရောက်နေသလဲ သိရအောင် ၊ မေးခွန်းတွေ ဖြေနိုင်တယ် ။ မေးခွန်းတွေရဲ့ ရလဒ်ကို ခုလို ဒီနေရာမှာ အသေးစိတ် ရှင်းပြထားပါတယ် ။ အောက်မှာတော့ ကျွန်မ အကျဉ်းချုံးပြီး ဘာသာပြန်လိုက်ပါတယ် ။
(၁) Active & Reflective Learners: 
Active Learner တွေဟာ လေ့လာသင်ယူချက်တွေကို အမြဲမှတ်မိနားလည်နေနိုင်ဖို့ ၊ လက်တွေ့ လုပ်တာဖြစ်ဖြစ် ၊ တခြားသူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးဖလှယ်တာဖြစ်ဖြစ် ၊ သူများကိုပြန်ရှင်းပြတာဖြစ်ဖြစ် လုပ်လေ့ရှိတယ် ။
Reflective Learner တွေကတော့ ပထမဆုံး ကိုယ့်ဘာသာတွေးတောစဉ်းစားတတ်တယ် ။
Active Learner တွေက အဖွဲ့ လိုက်လေ့လာရတာ အားသန်ပြီး ၊ Reflective Learner တွေကတော့ တစ်ဦးစီ လုပ်ရတာ ပိုနှစ်သက်တယ် ။
“ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ လုပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်” (Active Learners)
“အရင်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်” (Reflective Learners)
ဒီ Dimension မှာ ၊ လူတွေဟာ တဘက်ကို နည်းနည်းပိုအားသန်တတ်ကြပေမယ့် ၊ ညီမျှမှုတခုနားမှာပဲ ရှိသင့်တယ် ။ သိပ်အစွန်းမရောက်သင့်ဘူး ။ ရောက်လွန်းရင် ဘာမှမတွေးတောပဲ လက်တွေ့ အရမ်းလုပ်မိ ၊ အမှားတွေပေါ်လာနိုင်သလို ၊ တွေးတောလွန်းနေတာပဲဆိုရင်လည်း လက်တွေ့ ဘာမှမဖြစ်လာနိုင်ဘူး ။
(၂) Sensing & Intuitive Learners: 
Sensing Learner တွေဟာ ရှိဖူးပြီးသား ပုစ္ဆာမျိုးတွေကို သင်ထားဖူးတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ စနစ်တကျဖြေဆိုချင်ကြတယ် ။ သင်ပြမထားသေးတာတွေကို ဖြေဆိုဖို့ ၀န်လေးတယ် ။ သူတို့တွေဟာ အသေးစိတ်လေ့လာတတ်ကြပြီး ၊ မှတ်သားရတဲ့အလေ့အထ အားသန်တတ်တယ် ။ လက်တွေ့ ကို ပိုဦးစားပေးကြတယ် ။
Intuitive Learner တွေကတော့ အထပ်ထပ်လုပ်နေရတာ မနှစ်သက်တတ်ကြဘူး ။ အသစ်ကိုရှာဖွေ လေ့လာ တီထွင်ချင်တတ်ကြတယ် ။ အချက်အလက်တွေ မှတ်သားထားရခြင်း ၊ အဆင့်လိုက်တွက်ချက်နည်းတွေကို မကြိုက်ကြဘူး ။
ဖြစ်သင့်တာကတော့ .. တချို့တချိန်တွေမှာ ပုံသေနည်းတွေပဲမလိုက်ဘဲ ၊ တီထွင်ကြံစထိုးဖောက်တတ်ရမယ် ။ တချို့အချိန်တွေမှာလည်း မှန်ကန်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ သေချာတွက်ချက်တတ်ရမယ် ။
(၃) Visual & Verbal Learners: 
ဒါကတော့ သိပ်အထူးရှင်းပြစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး ။ Visual Learner တွေက ပုံတွေ ၊ ဂရပ်ဖ်တွေ ၊ chart တွေ ၊ demostration ၊ ဗွီဒီယို စသည်တို့ကြည့်ပြီး ၊ သင်ကြားရတာကို အားသန်တယ် ။ Verbal Learner တွေကတော့ စကားနဲ့ ရှင်းပြ ၊ ရေးပြတာကို ပိုနားလည်တတ်ကြတယ် ။
ကျွန်မထင်ပါတယ်... လူတိုင်းက ဒီ dimension မှာတော့ မျှတမှုရှိကြမှာပါ ။ စကားတွေပဲ နားထောင်နေရရင် ၊ ငြီးငွေ့ လာသလို ၊ ပုံတွေချည်းပဲ မြင်နေရရင်လည်း ၊ စိတ်အာရုံလွင့်တတ်တယ် ။ ဒီတော့ ၂ ပိုင်းလုံး ကျွန်မတို့တွက် လိုအပ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ် ။
(၄) Sequential & Global Learners: 
ဒီဟာကို ဘာသာပြန်ရတာ နည်းနည်းတော့ ခက်တယ် ။ ကျွန်မတတ်နိုင်သလောက် ရှင်းပြရရင်... Sequential Learner တွေဟာ သင်ခန်းစာတခုချင်းစီ ဆက်စပ်ပြီးမှ ၊ သင်ခန်းစာကို နားလည်တတ်လေ့ ရှိတယ် ။ Global Learner တွေကတော့ အကြောင်းအရာအများကြီးကို ချပြထားတဲ့အထဲ ၊ အားလုံးကို လုံးစေ့ပတ်စေ့နားမလည်ရင်တောင် ၊ ချုံကြည့်ပြီး ဟိုနည်းနည်း ဒီနည်းနည်းနဲ့ အမြန်ဆုံးအချိန်မှာ လိုအပ်တာတွေဆွဲထုတ်ပြီး ၊ ပုစ္တာတွေကို ဖြေကြားလေ့ ၊ သိချင်တာကို လေ့လာလေ့ရှိတယ် ။
အပေါ်မှာပြထားတာကတော့ ILS မေးခွန်းတွေကို ဖြေဆိုထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ learning preferences ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ရလဒ်ပါ ။ ကျွန်မရဲ့ ရလဒ်က ဘာကိုညွှန်ပြထားလဲဆိုတော့ ... dimension ၃ခုမှာ ကျွန်မဟာ စကေး ၁-၃ ညီမျှစွာနေတဲ့ထဲ ပါပါတယ် ။ ကျွန်မရဲ့အဓိက အားသန်တဲ့ဘက်ကတော့ Active Learner အနေနဲ့ပါ ။
ဒီရလဒ်က ကျွန်မအတွက်တော့ မှန်သင့်သလောက်မှန်တယ်ဆိုရမယ် ။
ကျွန်မက လက်တွေ့ လုပ်ရတာ ၊ အဖွဲ့ လိုက် အိုင်ဒီယာတွေ ဆွေးနွေးရတာ ၊ သူများကို ပြန်ရှင်းပြပြီး သူမေးတဲ့မေးခွန်းပေါ်အခြေခံလို့ အဖြေထပ်ထုတ်ရတာ အားသန်တယ်.. ဒါပေမယ့် တခါတလေတော့လည်း ကိုယ့်ဘာသာ သီးသန့်လေး စဉ်းစားခန်းဝင်တတ်တယ် ။ အထူးသဖြင့် ဒဿနနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာမျိုး ။
ဗမာပြည်တုန်းက ကျက်တတ်တဲ့အကျင့်ရခဲ့တဲ့ကျွန်မဟာ စာကျက်ပြီးဖြေရတာ ၊ ကျက်ထားတာကို စနစ်တကျပြန်အသုံးချရတာကို နှစ်သက်တယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒစ်ဂျစ်တယ်လ်ခေတ်မှာ တီထွင်မှုဆိုတာ အမြဲကပ်ပါနေရတာကြောင့် ၊ နောက်.. အရာရာဟာ စနစ်တကျချမှတ်ထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းလို့မရတာကြောင့် ၊ innovation ဆိုတာကိုလည်း တတ်မြောက်လာတယ် ။
အဆင့်လိုက်သင်ယူရတာ နှစ်သက်ပေမယ့်လည်း ၊ လေ့လာသင်ကြားစရာတွေ များပြားလွန်းတဲ့ ဒီလောကမှာ ဟိုခုန် ဒီခုန်နဲ့ ယောင်ခြောက်ဆယ်ကျွန်မ global learner လည်း ဖြစ်နေတယ် ။
ဒီမေးခွန်းတွေဟာ ထောက်ပံ့တဲ့ tool အဖြစ်သာ သုံးသင့်ပြီး ၊ မေးခွန်းတွေကရတဲ့ ရလဒ်ဟာ ဖြေဆိုသူတိုင်းတွက် ၊ တသမှတ်ထဲ မှန်တယ် မှားတယ်လို့တော့ မပြောနိုင်ပါဘူး ။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင် learning style ကို ပိုသိသင့်တယ်လို့ အောက်မှာ ခုလို ဖော်ပြထားပါတယ် ။
ILS users should be aware of two important points:
(1) The ILS results provide an indication of an individual's learning preferences and an even better indication of the preference profile ofagroup of students (e.g.aclass), but they should not be over-interpreted. If someone does not agree with the ILS assessment of his or her preferences, trust that individual's judgment over the instrument results.
(2) A student's learning style profile provides an indication of possible strengths and possible tendencies or habits that might lead to difficulty in academic settings. The profile does not reflectastudent's suitability or unsuitability foraparticular subject, discipline, or profession. Labeling students in this way is at best misleading, and can be destructive if the student uses the label as justification foramajor shift in curriculum or career goals. (A learning style preference also does not serve as an excuse forabad grade on the student's last physics test.
ဒီပို့စ်ဟာ စာဖတ်သူများတွက်လည်း အကျိုးရှိပါစေလို့ မျှော်လင့်ရင်း .... ။
အက်ကွဲနေသော ပညာရေး (သို့) အက်ducation (သို့) Crack...